ရှေ့နောက်ဖွင့်ခဲ့သည် – Grab Love Story
by phyu May 8, 2021
” ဖြိုးညီရေ” ခေါ်သံနဲ့ အတူ အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မမမွန်တို့ လင်မယားဖြစ်နေသည်။ သူတို့လင်မယားနဲ့တောင်မတွေ့တာ နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။ မမမွန်ကဖြိုးညီရဲ့ အစ်မ တစ်ဝမ်းကွဲ ၊ ဖြိုးညီ အဖေရဲ့ညီမရဲ့ သမီးအငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဖြိုးညီ တို့အဖေက တရုတ်စပ်သည်။ အဒေါ့် ယောကျာ်းကလဲ တရုတ်ဆိုတော့ မမမွန်က ပီဘိတရုတ်မလေးတစ်ယောက်နှယ်။ အရပ်မြင့်မြင့် ရင်သားတွေကထွားထွား ၊ တင်သားတွေကလဲကြီးသည်၊ ရုပ်ကလဲတော်တော်ချောသည်။ သူ့ယောက်ျားဖြစ်သူယောက်ဖတစ်ဝမ်းကွဲက ကိုချမ်းသာ တဲ့။ ကားပစ္စည်းတွေ အကြီးအကျယ်ရောင်းတဲ့သူဌေးသား။ ရုပ်ကလဲ ချောသည်။ ဒီလိုပဲ မမမွန်နဲ့ကြိုက်ပြီး လက်ထပ်ကြတာ နှစ် နှစ်တောင်ကျော်ပေါ့။ ဖြိုးညီ အတွေးစတွေကိုဖြတ်လိုက်ပြီး ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကိုအိမ်ထဲခေါ်လိုက်သည်။ ”လာ….အကို နဲ့ မမ ဘယ်ကိုလာတာလဲ။” ” ဒီလိုပါပဲ နင့်အကိုအကြောင်းမသိသေးဘူးလား။ သူတီဘီဖြစ်တာလေ နောက်ဆုံးအဆင့် ဆေးယဉ်ပါး ရောဂါဖြစ်တာ။ ပထမဖြစ်တုန်းက ဆေးမှန်မှန်မသောက်တာနဲ့ နောက်ပိုင်းဆေးမတိုးတော့ပဲ ဖြစ်သွားတာ။ အခုလဲ နေမကောင်းဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါထထဖောက်သေးတယ်။ သွေးတွေအန်တာမှ မပြောပါနဲ့။ ” ဘေးနားက ယောက်ဖတော်ကတော့ တစ်ချက်သာကြည့်ပြီး ယဲ့ယဲ့ပြုံးပြသည်။ အပြုံးကနွမ်းလျှနေသည်။ “ဒါနဲ့ မမတို့ ဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲ။ ခဏလေးနော် ။အဖေနဲ့ အမေဈေးခဏသွားတယ်။ ပြန်ရောက်တော့မှာပါ ။ မကြာပါဘူး ။ “ “နင့်ကို ဆေးအကြောင်းလေးမေးချင်လို့လာတာပါ။ သူလဲဆေးတွေ သောက်နေတော့။ ဆေးဖိုးကလဲ တစ်လကိုငါးသိန်းလောက်ကုန်တယ်ဟယ်။ ဘာဆေးတွေလဲဆိုတာရယ် ။နောက်ရော အကောင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်ပါ့မလားလို့မေးချင်လို့။ “ ဓာတ်မှန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ အဆုတ်တွင် စပေါ့တွေက ဇကာပေါက်နှယ်။ အော်……. ပေလိုက်တဲ့ ငါ့ယောက်ဖ ။ ဘာလို့ အဲဒီလောက်တောင်ဆိုးဝါးသွားပါ့လိမ့်။ ဖြိုးညီ တစ်ယောက်မချိတင် ကဲပင်တွေးမိလိုက်သေးသည်။ သို့သော် လူနာတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျအောင်မပြောသင့်သောကြောင့် ” ကောင်းမှာပါ မမ ဆေးကိုပုံမှန်သောက်လေ။ ဒီအစက်အပြောက်တွေကတော့ ပြန်ပျောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျန်တာတော့ သူ့ဆေးပတ်လည်အောင်သောက်လို့ တီဘီ bacilli တွေကုန်သွားရင် ပျောက်မှာပါ။
နောက်ပိုင်းတော့ ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့ ။ အပင်ပန်းမခံနဲ့တော့ပေါ့။ သက်တောင့်သက်သာပဲနေရမှာပေါ့။” ” ဒါတောင်နင့်အကို က ဆေးလိပ်ပြန်သောက်ချင်သေးတယ် ။ မနည်းတားထားရတာ ။အရင်ထဲက ဖင်မီးခိုးထွက်အောင်သောက်တဲ့လူလေ။ ” ပြောရင်းဆိုရင်း ဖေဖေနဲ့မေမေပြန်ရောက်လာလို့ စကားစပြတ်သွားသည်။ သူတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ မိဘနှစ်ပါး စကားကောင်းနေကြသည်။ အာလ္လာပ သလ္လာပတွေကို ဆက်နားမထောင်ချင်တော့တာ နဲ့ အခန်းထဲဝင်ပြီး ကိုနတ်သားရေးထားတဲ့ ” ပြန်ပြောပြဖို့တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုပဲပြန်ဖတ်နေမိသည်။ ဖတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖတ်လိုက်တာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားသည်မသိ။ဧည့်ခန်းထဲက ”သားရေ ခဏလာဦးပြောစရာရှိလို့ ။ ” အမေရဲ့ ခေါ်သံကိုကြားလို့ အပြင်ကိုထွက်ကြည့်မိသည်။ ” သားကိုရန်ကုန်ထည့်ပေးလိုက်မလို့ ။ သွားအထုတ်သွားပြင်ချေ ။ နေ့လည် နင့် အစ်မတို့ပြန်ရင်တစ်ခါထဲလိုက်သွား နင်ကျောင်းပိတ်တဲ့ နှစ်လ ဒီမှာလဲအားနေတာပဲ လတ်လျား လတ်လျားနဲ့ ဘာမှလဲမဟုတ်ဘူး ။ဟိုမှာအကူညီလိုနေတာ သွားကူညီချေ။ ” ဖြိုးညီလဲ ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီး အထုတ်အပိုးတွေပြင်ဆင်နေလိုက်သည်။ နေ့လည်ထမင်းစားပြီးတော့ အစ်မတို့ကားနဲ့ ရန်ကုန်လိုက်ခဲ့သည်။ ယောက်ဖက ကားတောင်သိပ်မမောင်းနိုင်။ ပဲခူးလာတုန်းကတောင် အစ်မ မောင်းခဲ့တာ ။ အပြန်တော့ ကျွန်တော်မောင်းမယ် မမဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင် မောင်းပြီးလာခဲ့လိုက်သည်။ အိမ်က စဥ့်အိုးတန်းလမ်း ခြောက်လွှာ ။ ယောက်ဖက သုံးလွှာလောက်ပဲတက်ရသေးသည် … ဟောဟဲ …ဟောဟဲ ဖြစ်နေလို့ သူ့ကိုစောင့်စောင့်ပြီးခေါ်ရသည်။ အပေါ်ရောက်တော့ ယောက်ဖ မောပြီးဖလက်ပြသွားသည်။ အခန်းထဲသွားနားနေသည် ။ ”မောင်လေးရေ ………. အထုတ်တွေဝိုင်းကူထားပါဦး ။ နင့်အကိုအထုတ်ကို သူ့ အခန်းထဲထား ။ မမအထုတ်ကိုတော့ ဒီကိုယူလာခဲ့ ။ ” ” မမက အကိုနဲ့တစ်ခန်းထဲအတူတူအိပ်တာမဟုတ်ဘူးလား” ” နင့်အကိုဆီကပိုးကူးမှာစိုးလို့ ခွဲအိပ်တာ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီ။ သူကလဲ ဆေးပြင်းတွေသောက်ရတော့ ညညဆို တန်းပြီးအိပ်ပျော်တာပါပဲဟယ်။ လင်မယားကိစ္စလဲသိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ” အိမ်ထောင်ကျတာမှ နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးသည်။ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ခွဲအိပ်ရသော မမကိုလဲ သနားမိသည်။ သို့သော် ဘာစိတ်မှ မဖြစ်မိပေ။ ဒီလိုနဲ့ မနက်စောစောထတဲ့ သူ့အကျင့်ကြောင့် မနက်စောစောရေနွေးတည်၊ ထမင်းအိုးတစ်လုံးချက်ပြီး ဈေးသွားလိုက်သည်။ ဈေးကပြန်လာတော့ မမမွန်တစ်ယောက် ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာတာနဲ့တန်းတိုးသည်။
ရင်လျှားပေါ်မှာတဘက်လေးလွှားထားသည်။ ”အော်……. မမမွန် နိုးနေပြီလား။ ကျွန်တော်တောင်ဈေးကပြန်လာပြီ ။ ကြက်သားနဲ့ အာလူးရယ် ၊ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်နဲ့ ပဒတ်စာလေးပဲချက်ပြီး ငပိရည်နဲ့ တို့စရာလေး တို့မလို့စီစဉ်ထားတယ်။” ဖြိုးညီတစ်ယောက်ရေပက်မ၀င် စကားတွေကိုဖောဖောသီသီပင်ပြောမိသည်။ ” ဒါနဲ့ မမမွန်မျက်နှာမကောင်းပါလား။ ညက အိပ်မပျော်လို့လား။ ဘာဖြစ်လို့လဲမမရဲ့။” သေချာမေးကြည့်တော့မှ.. ” ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ညက မမမွန်ခြေဆစ်လက်ဆစ်တွေကိုက်လို့အိပ်လို့မရဘူးလေ။ မိုးအေးတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဆရာဝန်ကတော့ လေးဘက်နာလို့ပြောတာပဲ။ အဲဒါ မိုးအေး တိုင်းဖြစ်နေတော့ စိတ်ညစ်နေတာပါ။ ” ” ဒါများမမမွန်ရယ် ညထဲက ပြောပါလား ။ ကျွန်တော် ဆေးပေးပြီး ကုပေးမှာပေါ့။ ဘာလဲ ကိုယ့်မောင်လေးကို ကျောင်းမပြီးသေးဘူးဆိုပြီးမယုံဘူးလား။ ” ”လာ… ဒီမှာထိုင် ။ ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ အဲဒါ Rheumatoid arthritis လို့ခေါ်တယ် ။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်ပေါ့။ နောက်တစ်ခါဖြစ်ရင်ကျွန်တော့်ကိုခေါ်လေ။ ” ” အင်း ” ”ကျွန်တော်မနက်စာပြင်ထားတယ်။ အကို့ကိုနှိုးလိုက်ဦးလေ။ တူတူစားရအောင်။” ”ရတယ်မောင်လေး သူကနေမြင့်မှထတာ ။ သူ့ကို နှိုးရင်လဲမကြိုက်ဘူး။ ” ” မောင်လေးနဲ့ မမပဲအရင်စားထားနှင့်မယ် ။ နောက်မှချက်ပေါ့ ။ ၀ီရိယကောင်းနေလိုက်တာနော်။” ” ခဏလေး မမအ၀တ်အစားသွားလဲလိုက်ဦးမယ်။ ” ပြောရင်းဆိုရင်းထွက်သွားသော မမမွန်ရဲ့ နောက်ပိုင်းကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ တင်သားတွေက ထွားပြီး အယ်နေသည်။ အသားက ရေစို တော့ ထမိန်က တချို့နေရာတွေ အသားမှာကပ်နေသည်၊ တင်သားတွေ လှုပ်တာ ထမိန်က ကပ်ပါသွားတော့ တဖက်တချက် စီ၊ တက်လိုက်ကျလိုက်က ကြည့်လို့ကောင်းနေသည်၊ကာမမှုလဲကောင်းကောင်းမပြုဖြစ်တော့ ကျမသွား။ ဒီကြားထဲ အိမ်အလုပ်တွေကို သူတစ်ယောက်ထဲဒိုင်ခံလုပ်ရတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလိုဖြစ်ပြီး ရင်သား ၊ တင်သားတွေက ကျစ်လစ်နေသည်။ နေ့လည် အိမ်နောက်ဖေးမှာဟင်းချက်ရင်း မမမွန်နောက်မှာရောက်တာမသိပဲ လှည့်လိုက်တော့ ရင်ချင်းအပ်သလိုဖြစ်သွားပြီး မမမွန်ရဲ့ နို့ကြီးတွေနဲ့ ပွတ်မိသွားသည်။ အိစက် နေသောအတွေ့အထိကြောင့် ကတုန်ကရင်တောင်ဖြစ်သွားသည်။ မနဲစိတ်နှစ်ပြီး ဟင်းအိုးထဲအာရုံစိုက်လိုက်ရသည်။ နေ့လည်စာ ဖြိုးညီလက်ရာကို ချီးကျူးကြသည်။ ဖြိုးညီလဲ နေ့လည်စာစားပြီး သူ့အခန်းထဲဝင်ကာတစ်ရေးတမောအိပ်လိုက်သည်။
ညနေစောင်းလောက်နိုးတော့ လေ့ကျင်ခန်းလုပ်သည့် အနေနဲ့ ဒိုက်ထိုးပြီး ဘောင်းဘီတိုနှင့်ပင် ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး ရေပန်းအောက်မှာအားရပါးရရေချိုးလိုက်သည်။ ညနေစာစား ၊ ပြီးတော့ ယောက်ဖနဲ့ဘောလုံးပွဲကြည့် ။ ပထမပိုင်းပြီးတော့ ယောက်ဖက မကြည့်နိုင်တော့ ။ အားနည်းတာရော ၊ အိပ်ရေးပျက်မခံနိုင်တာရောကြောင့် အိပ်တော့မည်ပြောသည်။ မမမွန်က အိပ်ယာခင်းပေး စောင်ခြုံပေးသည်။ ယောက်ဖအိပ်သွားပြီးမှ ပြန်ထွက်လာသည်။ ”ငါ့မောင်လေး မအိပ်သေးဘူးလား။ မမတော့ အိပ်တော့မယ် ။” ” ရတယ် မမ ကျွန်တော်က နှစ်ပွဲဆက်ကြည့်မှာ ။ ၉ခွဲပွဲပြီးရင် ၁၂နာရီပွဲလာဦးမှာဆိုတော့ ၂နာရီကျော်လောက်မှ အိပ်ဖြစ်မှာ ။” ” ဂွတ်နိုက်နော် မမ။ ” ဒုတိယပွဲကြည့်ရင်း ပထမပိုင်းအပြီး ခဏနားတော့ ဘောလုံးဂျာနယ်ဖတ်ဖို့လိုက်ရှာမှ ဂျာနယ်က ခြင်းတောင်းထဲထည့်လိုက်မိမှန်းသိသည်။ဒီကိုလာတုန်းက အထုတ်မဆန့်တာ နဲ့ ခြင်းတောင်းထဲထည့်ထားတာ ။ ခြင်းတောင်းက မမမွန်အခန်းထဲမှာ ။ မထူးပါဘူးလေ ။ဘယ်သူမှမ မဟုတ်တာ ကိုယ့်အစ်မပဲ ဆိုပြီး အခန်းထဲဝင်လိုက်သည်။ နိုးသွားမှာကြောက်လို့ ခြေဖွနင်းပြီး အခန်းထဲဝင် ၊ ကုတင်အောက်က ခြင်းတောင်းကို ငုံ့ယူနေစဉ် ”မောင်လေး ဘောလုံးပွဲပြီးပြီလား။” ” အော် မမ မအိပ်သေးပဲကို ၊ မပြီးသေးဘူးမမ ။ ပထမပိုင်းပြီးပြီ ပျင်းနေလို့ ဘောလုံးဂျာနယ်ဖတ်မလို့ဟာ ဘောလုံးဂျာနယ်ကခြင်းတောင်းထဲပါသွားလို့ လာယူတာ။” “ အော် အေးအေး “ ” မမ မအိပ်သေးဘူးလား ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ။ ” ”အဆစ်အမြစ်တွေကိုက်ပြန်ပြီငါ့မောင်ရယ်။ လက်ဆစ်ခြေဆစ်တွေကိုက်နေတာ။” ”အော်….. ဒါလေးများမမရယ် ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာဆေးပါလာတယ် ခဏစောင့်။ ” အခန်းထဲပြန်ပြီး အသင့်ရှိနေတဲ့ အစာအိမ်မထိတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကိုပဲ Antacid လေးနဲ့တွဲပြီးပေးလိုက်သည်။ဆေးတိုက်ပြီးတော့ ”မမ..လက်ဆစ်တွေကိုက်နေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်နှိပ်ပေးရဦးမလား။” ”အင်း နှိပ်ပေးလေ ။ ကောင်းတာပေါ့ ငါ့မောင်ရယ်။ မမကတော့ အရမ်းကိုက်တာပဲသိတယ်။ ” ဖြိုးညီ တစ်ယောက်မမမွန်ရဲ့ လက်ဆစ်တွေကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ နှိပ်ပေးနေမိသည်။ လက်ချောင်းလေးတွေက သွယ်လျှနေသည်။ ဖော့ဖယောင်းလိုနူးညံ့နေသည်။ ကုတင်က နံရံကပ်ထားတာဆိုတော့ နံရံဘက်နှင့် ဝေးသည့် ဒီဘက်လက်ကို နှိပ်ပေးတုန်းက ဘာမှမဖြစ်။ ဟိုဘက်လက်ကို ကျတော့ မမက သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်တင်ပေးထားသည်။ လက်ကိုနှိပ်ရင်း တစ်ချက်တစ်ချက်ရင်သားကြီးတွေကို ထိမိတော့ အိစက်သည့်အထိအတွေ့ကြောင့် အောက်ကညီတော်မောင်က ခေါင်းထောင်ချင်လာသည်။
ပုဆိုးပဲဝတ်ထားတာရယ် ၊ ညဘက်အိပ်ခါနီးဆိုတော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီက၀တ်မထားတော့ ပုဆိုးအောက်မှာငေါထွက်နေသည်။ မမွန်ကတော့ မသိလောက်။ ခဏကြာတော့ ”ရပြီငါ့မောင် လက်ကတော့ တော်တော်လေးသက်သာသွားပြီ။ လုပ်ပေးလက်စနဲ့ ခြေဆစ်လေးတွေနှိပ်ပေးဦး။ ဒူးခေါင်းရောပဲ။ ခစ်ခစ် ” ဖြိုးညီ ခြေချောင်းလေးတွေကို ညင်ညင်သာသာနှိပ်ပေးသည်။ ကော့လိုက် ကုတ်လိုက်ချိုးပေးသည်။ အဆစ်လေးတွေပေါ်မှာလက်နဲ့ဖိပေးသည်။ ခြေရင်းကနေ အပေါ်ကိုမော့ကြည့်တော့ အောက်ခံမ၀တ်ထားတဲ့ ည၀တ်အကီင်္ျပေါ်မှာ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို မြင်လိုက်ရတော့ အာခေါင်တွေတောင်ခြောက်လာသည်။ ခဏနေတော့ မမက အပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီး ” ဒူးခေါင်းလေးပဲနောက်ဆုံးနှိပ်ပေးတော့ ငါ့မောင်ရေ။ မောင်လေးလဲတော်တော်ညောင်းနေတော့မယ်။ မမ လဲဆေးသောက်လိုက်တော့ တော်တော်ကောင်းသွားတယ်။” ဒူးခေါင်းကို နှိပ်ပေးရင်း ခြေသလုံးသားဖြူဖြူလေးတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်တော့။ ဖြိုးညီ့ လက်ဖဝါးတွေက နှိပ်နေတာ မဟုတ်တော့ပဲ ဖွဖွလေး ဆုပ်ပြီး ပွတ်သတ်နေမိ မှန်းတောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိမထားမိတော့ပေ။ ဖြိုးညီ ခေါင်းထဲ မှာ တခြားဟာတွေ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး၊ အခု မြင်နေရတဲ့ ဒူးခေါင်းလောက် အဆင့်ကနေ ပိုပြီး မြင်ချင်လာမိပြီ။ ဖြိုးညီ လက်တွေက မမမွန်ရဲ့ ဒူးဆစ်ကလေးကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်ပေးရင်းက ပေါင်လုံးတွေပေါ်ကို ရောက်သွားသည်၊ ထမိန်စက ဒူးလောက်ထိပဲ ရှိသေးတော့ မမမွန်ရဲ့ ပေါင်တန် တွေကို မတွေ့ ရပေမဲ့ ဖြိုးညီလက်ဖဝါးတွေက ချောမွတ် တောင့်တင်း နေတဲ့ အသားတွေကို ထမိန်အောက်က ပဲ လက်လျှို ပွတ်လို့ကောင်းကောင်း နဲ့ မို့ တဖြေးဖြေးချင်း ပေါင်ရင်းနားထိ တိုးပွတ်သပ် လာမိသည်။ ဖြိုးညီ လက်ဖဝါးက ပေါင်ရင်းနားထိ ရောက်လာတာမို့ ဖြိုးညီရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်တွေက သူ့ အလိုလို မမမွန်ရဲ့ ထမိန်အနားစ ကို တွန်းတင်ပေး လာသလိုဖြစ်လာတော့၊ မမမွန်ရဲ့ ပေါင်တန် ဝင်းဝင်းကို စမြင်နေရပြီ။ ဖြိုးညီ မမမွန်ရဲ့ မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးအစုံပိတ်ထားတာ တွေ့ရ သည်၊ မျက်စေ့လေးပိတ်ပြီး နူတ်ခမ်း မဟတဟ နဲ့ မမမွန် ရဲ့ မျက်နှာလေး မှာ နဖူးကြောလေး သိမသာကြုံ့နေတာ လည်း တွေ့လိုက်ရသည်။ မမမွန် သိရက်နဲ့ ဘာမှ မပြောတာ ကို တွေ့ရတော့ ဖြိုးညီ ပိုရဲလာသည်၊ လက်တွေက ပေါင်အပေါ်တွေ ဘေးတွေကို စက်ဝိုင်းလို ပွတ်နေရင်း သူ့ လက်ဖျံဖြင့် ထမိန်ကို ပိုလှန်အောင် တွန်းပို့ပေးလာခဲ့သည်၊ ဖြုဝင်းမွတ် ချောနေသော ပေါင်လုံး နှစ်လုံးကို တဝက်လောက်မြင်ရတော့ ဖြိုးညီ ရဲ့ ညီတော်မောင်က မာတောင့်တင်းနေတာ နာတောင်နာလာပြီ။ အဲဒါနဲ့ ညာဘက်က ဆက်ပွတ်ပေးနေရင်း ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ ထမိန်ကို မမမွန် ဗိုက်ပေါ်ထိရောက်အောင်လှန်တင်လိုက်သည်။ ဘွားကနဲ ပေါ်လာတဲ့ မမမွန်ရဲ့ စောက်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်းကြီးက အမွှေးအမျှင်တွေ သန့်စင်ထားလို့ ပြောင် ပြီး အကွဲကြောင်းမှာ တွန့်လိမ်လိမ် နူတ်ခမ်းဖတ်လေး တခုက ညိုညို မဲမဲလေးနဲ့ ၊ ဘေးနားက ပန်းရောင်ရင့်ရင့် အတွင်းသား လေးတွေက အရည်ကြည်တွေ စို ပြီး မီးရောင်အောက်မှာ အရောင်ပြန်လဲ့နေသည်။ ဖြိုးညီ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ ပွတ်နေတဲ့ လက်တဘက်ကို ပါ ရပ်လိုက်ပြီး မမမွန်ရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ဝင် ဒူးထောက်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ပေါင်နှစ်လုံးကို အသာလေး တွန်းပြီး ကားလိုက်တယ်၊ အဲတော့မှ မမမွန်က ရုတ်တရက်လှန့်နိူးသလိုနဲ့ မျက်လုံးအစုံပွင့်လာပြီး၊ ” အာ…… ငါ့မောင် ဘာတွေ လုပ်နေ တာလဲကွယ်။ မတော်ပါဘူး။” “ ကျွန်တော် စိတ်မထိန်းနိူင်တော့ လို့ပါ မမ ရယ်၊ ခွင့်လွှတ်ပါတော့ “ မမမွန်က သူထမိန်ကို ပြန်ဆွဲဖုံး ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို စေ့ဖို့ ကြိုးစားသည်။
ဒါပေမဲ့ ဖြိုးညီက သူ့ပေါင်နှစ်လုံး ကြားထဲ မှာရောက်နေပြီ ဆိုတော့ ပေါင်နှစ်လုံးက ဖြိုးညီကို ညှပ်ထားလိုက်သလိုဖြစ်နေသည်။ ဒါ့ အပြင် ပေါင်နှစ်လုံးကို ညှပ်ဖို့ ဒူးနှစ်လုံးကို ထောင်လိုက်ရတော့ အခု မှ ဒူးထောင်ပေါင်ကား ဆိုတော့ လိုးပါတော့ လို့ ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပင်။ ဖြိုးညီတစ်ယောက် မမမွန်ပြန်ဖုံးလိုက်တဲ့ ထမိန်ကို အနားက ကိုင်အသာဆွဲလှန်ပြီး အဖုတ်ကြီးကို ကုန်းလျက်လိုက်သည်။ “ အို ဟဲ့ အား ရှီး အိုး မကောင်းဘူးထင်တယ်နော်..အို့ ခက်တော့တာပဲ ကျွတ်စ်ကျွတ်စ်” မတော်ပါဘူးသာပြောနေတာ အဖုတ်ထဲမှာ အရည်တွေရွဲနေသည်။ အရည်ကြည်လေးတွေကိုလျှာကြီး နဲ့ တစ်ခါထဲ သိမ်းကြုံး လျက်လိုက်သည်။အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်လွှာကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ စုငုံပြီး ချိုချဉ်စုတ်သလို ဆွဲစုတ်လိုက်သည်။ ” ရှုး…. အား….ဘယ်လိုများလုပ်နေတာလဲ ငါ့မောင်ရယ်….အင့်.” မမမွန်တစ်ယောက် ကော့ပြန်နေသည် ။ ခါးကော့ပြီး အဖုတ်ကြီးကို ကော့ပေးသည်။ အဖုတ်ကြီးကို ဖြိုးညီမျက်နှာနှင့်ကပ်ပေးသည်။ အစေ့လေးကို ဆွဲစုတ်ပေးသည်။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ဖြဲပြီး ပန်းရောင် အတွင်းနံရံထဲကို လျှာကိုခေါက်ကာပို့လွှတ်လိုက်သည်။ ” အ…..အ……. နာနာလေးလျှက်….. ကောင်းလိုက်တာ…. ” အစေ့ကို စုတ်လိုက်၊ လျှာနဲ့ထိုးမွှေလိုက်၊ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖြိုးညီနှုတ်ခမ်း တေ့ပြီးစုတ်လိုက် လုပ်နေတုန်း မမမွန် လက်နှစ်ဖက်က ဖြိုးညီလက်နှစ်ဖက်ကိုယူပြီး သူ့နို့အုံပေါ်မှာတင်ပေးသည်။ တင်းအိပြီးနူးညံ့နေတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ည၀တ်အကျီင်္ပေါ်ကပဲ နာနာနယ်မိသည်။ ” ညှစ် နာနာ ညှစ် ကောင်းနေပြီ ။ ကောင်းလိုက်တာ။ အောက်ကလဲ ပြီးတော့မယ်..။ ” ”အား …… အား……….. ပြီးပြီ ပြီးပြီ …။ ” ခါးလေးကိုကော့ ပြီး အရည်တွေ ဒလဟော ထွက်ကာ ပြီးသွားသည်။ ဖြိုးညီမျက်နှာမှာလဲ အရည်တွေလူးနေသည်။ ထွက်လာတဲ့ အရည်တွေတစ်ခါထဲမျိုချ လိုက်သည်။ မမမွန်အရည်က အချဉ်ဓာတ်မများ ။ အနည်းငယ် ငန်သည့်ဘက်ကဲသည်။ သိပ်မချဉ်ဘူးဆိုတော့ အက်ဆစ်ဓာတ်နည်းတယ် ။ PH နိမ့်မှာပေါ့ ။ ဖြိုးညီ စိတ်ထဲကပင် စောက်ရည်ကို ဓာတ်ခွဲကြည့်မိသည်။ စိတ်ကူးနေလို့ မပြီးသေး ။ အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရဦးမယ် ဆိုပြီး ။ ပုဆိုးကိုတစ်ခါထဲ ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ အောက်က စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ညီတောင်မောင်က ဘွားကနဲ ထွက်လာသည်။ မမမွန်ကတော့ လျှာနဲ့တင် တစ်ချီပြီးသွားလို့ မျက်လုံးလေးမှေးနေသည်။ ဖြိုးညီ ဒူးထောက်ကာ ထောက်ကာနဲ့ ခေါင်းရင်းဘက်ကိုသွားလိုက်သည်။ ညီတော်မောင်ကို ပါးစပ်နားလေးကပ်ပြီး ။ …မမမွန်…. လို့ညင်ညင်သာသာခေါ်လိုက်သည်။ မမမွန် မျက်လုံးဖွင့် ကြည့်လိုက်တော့ ပါးစပ်နားမှာ တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့ ညီတော်မောင်ကိုတွေ့ပြီး မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားသည်။” အာ …… အကြီးကြီးပဲ ။ နင့်အကိုဟာ တောင် အဲလောက်မကြီးဘူး။” ” ကျွန်တော်က အဆောင်မှာပျင်းနေတာနဲ့ အားအားရှိ ပန့်ဆွဲထားတာလေ။ အဲဒါကြောင့်ပါ။ ” “ အားရ ပါးရကြီးနော် ..ငါ့မောင်က မခေဘူးပဲ” ”ကျွန်တော့်ကိုလဲ တစ်လှည့်လုပ်ပေးပါဦးမမရယ်။ ” စကားဆုံးတော့ လက်လေးတစ်ဖက်ကိုကြွပြီးညီတော်မောင်ကိုလှမ်းကိုင်လိုက်သည်။ ခေါင်းလေးကိုကြွပြီး ဒစ်ထိပ်ဖျားလေးကိုငုံသည်။
ဒစ်တစ်ခုလုံးပါးစပ်ထဲတွင်ထည့်ပြီး လျှာလေးနဲ့လှည့်ပတ်ကစားသည်။ ဒစ်အနားသားလေးတွေကို လျက်သည်။ နောက် ခေါင်းကိုကြွပြီး လီးတစ်ဝက်လောက်ထိရောက်အောင်ငုံပြီး ကြွကာကြွကာနဲ့ မှုတ်ပေးသည်။ လီးပတ်လည်ကို လျှာလေးနဲ့ ရေခဲချောင်းလျက်သလို လျက်သည်။ အရမ်းကောင်းတာကြောင့် ဖြိုးညီ တစ်ယောက်ပြီးချင်ချင်ပင်ဖြစ်သွားသည်။ ” ကဲ မမ ရပြီ။ လုပ်တော့မယ် ။” “ ဟုတ်ကဲ့ ပါ ကိုယ်တော်ချော ရယ်..တခါထဲ ကိုယ့်အမ ကို ပြောလိုက်တာများ..” ”ပေါင်လေးကိုနည်းနည်းကားပြီး ဒူးထောင်ပေးနော်။” ပါးစပ်ကသာပြောနေသာ မမမွန်ခမျာ ဖြိုးညီပြောတဲ့ အတိုင်းလိုက်လုပ်ပေးရှာသည်။ ဖြိုးညီ ထောင်ထားတဲ့ ဒူးနှစ်လုံးကြားတွင် ဒူးထောက်ပြီးနေရာယူလိုက်သည်။ အဖုတ်ဝ တွင်လီးကိုတေ့ပြီးချက်ချင်းမထည့်သေးပဲ အဖုတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက်ပွတ်ပေးလိုက်တော့ မမမွန်တစ်ယောက်ကော့တက်သွားသည်။ ” အ…… လုပ်ပါတော့ ငါ့မောင်ရယ် ။ မမစိတ်တွေပြန်ကြွလာပြန်ပြီ။” “ မမမွန် ဒါဆိုထည့်လိုက်တော့မယ်နော်။” “ အင်း အင်း ကွာ..မင်းကလည်း ရှက်စရာကြီး ဘာတွေ ပြောနေမေးနေမှန်းမသိဘူး “ ဖြိုးညီ သူ့လီးကြီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးထည့်လိုက်သည်။မလုပ်တာကြာတော့ အပေါက်က တော်တော်ကျပ်နေသည်။ ဖြိုးညီ အားနည်းနည်းစိုက်ပြီး ဖိထိုးလိုက်တော့ မမမွန်ဆီမှ ညည်းသံ နည်းနည်းထွက်လာသည်။ ”မောင်လေး ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါနော် ။ မမကမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီ။” ”ဟုတ်ကဲ့ မမ။ ” ဒစ်ဝင်ပြီးသွားတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆက်ထိုးထည့်လိုက်တာ တစ်ဝက်လောက်ဝင်သွားသည်။ အပြင်မှာသုံးလက်မလောက်သာကျန်တော့သည်။ ကျန်တဲ့ သုံးလက်မကို အဆုံးထိဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။ ”ဒုတ်……. လီးထိပ် နဲ့ သားအိမ်ခေါင်းသွားဆောင့်သည်။” ”အား ……. နာတယ် မောင်လေး ဖြည်းဖြည်းလုပ်။” ”ဟုတ် …… မမ” ဖြိုးညီ တစ်ဝက်လောက်ပြန်ထည့်လိုက် ထုတ်လိုက်နဲ့ အသားကျသွားအောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်နေမိသည်။ ၁၀ချက်လောက်လုပ်ပြီးသွားတော့ အသွင်းအထုတ်ကို နည်းနည်းအရှိန်မြင့်လိုက်သည်။ ”အ…. အ…… ကောင်းလာပြီ မောင်လေး လုပ်လုပ်” အဖုတ်ထဲက အရည်တွေနဲ့ လီးအသွင်းအထုတ်လုပ်တဲ့ အသံတွေ ဆူညံနေသည်။ တော်သေးတာပေါ့။ တိုက်ခန်းက အသံလုံလို့ ။ ဖြိုးညီစိတ်ထဲက တွေးမိသည်။ ပြီးတော့ ကိုယ့် အစ်မ တစ်ဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် လိုးနေရပါလားဆိုတဲ့ အသိက အသစ်အဆန်းတစ်မျိုး ဖြစ်စေသည်။ ဖြိုးညီ ဥ နဲ့ မမမွန်ဖင်နဲ့ရိုက်သံတွေဆူညံ နေသည်။
အဖုတ်ကတင်းကျပ်စီးပိုင်နေပြီး လီးကိုသားရေကွင်းနဲ့ ဆုတ်ညှစ်ထားသလို ခံစားရသည်။ စိတ်ထဲတော်တော်ကောင်းလာသောကြောင့် နို့ကိုဆွဲရင်းနာနာဆောင့်လိုးလိုက်တာ ကြာကြာ မလိုးလိုက်ရ ခဏနဲ့ပြီးချင်လာသည်။ ကွန်ဒုံးလဲမပါသောကြောင့် လီးကိုအပြင်ကိုပဲဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး သုက်ရည်တွေကို ဗိုက်ပေါ်ပဲပန်းချလိုက်သည်။ ” အား……….. ရှုး……….. ကောင်းလိုက်တာမမရယ်…..” ဖြိုးညီ မမမွန်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးပဲ နမ်းလိုက်သည်။ ခဏနေတော့ မမမွန်ဆီကမွတ်သိပ်သော အနမ်းတွေ ပြန်လည်ရရှိသည်။ ” ဒီလိုမျိုးမနေရတာကြာပြီငါ့မောင်ရယ်……….. အခုလိုလုပ်မိတာ မကောင်းပေမဲ့ မမရဲ့ ဆန္ဒ ပြည့်ဝအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။” ”မမဆန္ဒပြည့်ပေမဲ့ ကျွန်တော့် ဆန္ဒ မပြည့်သေးဘူးမမရယ် ။ ကျွန်တော်လုပ်လို့မ၀သေးဘူး။” ”ဟုတ်လား ….. လုပ်ဦးမလို့….. လား…” စကားဆုံးခင် မျက်လုံးက ပေါင်ကြားထဲကလီးကြီးကိုတွေ့ပြီး စကားတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ပင်ရပ်သွားသည်။ ” အို……. တောင်နေတုန်းပဲ။ မင်းကလဲကွာ ခစ်ခစ် ။” ” လုပ်ပါမမရယ် ။ လာ …. လေးဘက်ထောက်ပြီးဖင်ကုန်းပေး။” ကိုချမ်းသာနဲ့ ရကာစ တုန်းက ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လုပ်ခဲ့ဖူးသောကြောင့် သိပ်ပြဿနာမရှိ ။ ဖြိုးညီပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပင် သေချာကုန်းပေးလိုက်သည်။ ခါးကိုကော့ပြီးဖင်ကိုသေချာကုန်းပေးထားသောကြောင့် ကြီးမားဖြူဖွေးသည့် ဖင်ကြီး နှစ်လုံးအောက်က အဖုတ်ကြီးက ပြူးထွက်လာသည်။ ဖင်ကြားထဲပြူးထွက်နေသည့် အဖုတ်ကြီးကိုကြည့်ရင်းဖြိုးညီတစ်ယောက်စိတ်တွေဆူဝေလာပြီး အဖုတ်ကြီးကို သကြားလုံးစုတ်သလို ပြွတ် ခနဲ ငုံပြီး ကုန်းစုတ်လိုက်သည်။ ” အား………. ကောင်းတယ် ……. ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး စုတ်ပေး” မမွန် တယောက်လည်း အပြောတွေ ကြမ်းလာပြီ၊ သုံးလေးချက်လောက် စုတ်ပြီးတော့ ဖြိုးညီ သူ့လီးကို မမမွန်အဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီး လက်တစ်ဖက်က ဖင်ကိုကိုင် နောက်တစ်ဖက်ကခါးကိုကိုင်ပြီး တစ်ခါထဲ တစ်ဆုံးသွင်းလိုက်သည်။ လီးကရှည်သည့်အပြင် ဖင်ကုန်းထားသောကြောင့် တစ်ခါထဲနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကိုသွားတိုက်သည်။ ”ဒုတ် ………. အ ……… ” မမမွန် ဆီကအသံထွက်လာသည်။ ”မောင်လေး နာနာဆောင့်တော့ ။ မမမွန်ခံချင်နေပြီ။ အတွင်းထဲထိမဆောင့်နဲ့ ဗိုက်ထဲကအောင့်တယ်။” ” အပြင်နားတင်နာနာဆောင့် ။” ဖြိုးညီလဲ မမမွန်ရဲ့ အယ်နေတဲ့ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကို အကျအနကိုင်ပြီး နာနာပင်ဆောင့်လိုးတော့သည်။အား…………ကောင်းတယ် ……. မောင်လေးဆောင့် ခဏနေတော့ ဖင်ကိုမကိုင်တော့ပဲ မမမွန်ခါးပေါ်ကို မှောက်ချလိုက်ပြီး နှို့ ကိုလက်ကဆွဲရင်း နှုတ်ခမ်းတွေက ကိုယ်သင်းနံ့မွှေးနေသည့် ဂုတ်သားလေးတွေကို ဆွဲဆွဲ စုတ်ရင်းဆောင့်လိုးမိသည်။
”ငါ့မောင်…. စုပ်တဲ့ အရာတွေမထင်စေနဲ့ …….. နင့်အကိုမြင်ရင် တစ်မျိုးထင်လိမ့်မယ်။” ”နာနာဆောင့်လေကွာ ……. ငါ့မောင်က အပေါ်ကိုအာရုံရောက်တာနဲ့ အောက်ကအရှိန်နှေးသွားတာကိုး။” ” ကိုချမ်းသာဆိုအဲလိုမဟုတ်ဘူး။ သူဆောင့်ရင် မီးပွင့်မတတ်ပဲ။ အပေါ်မှာ နမ်းပေမယ့် အောက်ကလဲဘယ်တော့မှ မနှေးဘူး။ ” ဖြိုးညီအဲလိုပြောသံကြားတော့ ။ မခံချင်စိတ်လဲဖြစ်သွားတာနဲ့ ခါးကိုကိုင်ပြီး ပ်သွက်သွက်ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ တော်တော်ကြာအောင် အားရပါးရလိုးပြီးတော့ နည်းနည်းမောလာတာနဲ့ ”မမအပေါ်က တစ်ခါလောက်တက်ဆောင့်ပါလား။” ”အင်း…… ဆောင့်မယ်။” လီးကို အဖုတ်ကြီးထဲကဆွဲထုတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်အိပ်လိုက်သည်။ မမမွန်ကမဆောင့်ခင် လီးကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီး စိတ်တွေကြွလာလို့ထင်သည်။ လီးအရင်းကနေကိုင်ပြီး စောက်ရည်တွေနဲ့ စိုရွဲပြီးပြောင်လက်နေတဲ့ လီးကြီးကို စိတ်ပါလက်ပါပင်စုတ်ပေးသည်။ ကိုချမ်းသာဘယ်လောက်တောင်သင်ပေးထားလဲမသိ။ ပုလွေ နဲ့တင် ပြီးချင်ချင်ဖြစ်လာတာနဲ့ အရမ်းလုပ်ချင်နေသလိုလို ပြောလိုက်ရသည်။ ” မမဆောင့်မယ်ဆိုအပေါ်တက်ဆောင့်တော့လေ ။ ကျွန်တော်မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ အရမ်းလုပ်ချင်လှပြီ။”ှ”ဟုတ်ပါပြီ ……. လုပ်မှာပါ။ ဒီကလဲ လီးတုတ်တုတ်ကြီး ကို ကြည့်ပြီးမနေနိုင်တာနဲ့ ကုန်းစုတ်မိတာပါ။ တကယ်ပါပဲနော်။” မမမွန်စကားပြောရင်း အပေါ်ကတက်ခွသည်။ လီးကိုလက်တစ်ဖက်ကထိန်းကိုင်ပြီး အဖုတ်ဝမှာတေ့ကာဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချသည်။လီးကြီးက တုတ်တော့ အဖုတ်နံရံနဲ့ နေရာလွတ်မရှိ အောင်ပြည့်ကြပ်သတ်နေသည်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်နေရာကနေ မမမွန်စိတ်ပါလာပြီး စိတ်ရှိလက်ရှိ ဆောင့်လိုက်သည်။ အောက်ကနေတဲ့ ဖြိုးညီလဲ မမမွန်ခါးကိုထိန်းကိုင်ပြီး အားရပါးရ ကော့တင်မိသည်။ အချက်ငါးဆယ်လောက်လုပ်ပြီးတော့ မမမွန်တစ်ယောက် အသံစုံမြည်ပြီး ဖြိုးညီကိုယ်ပေါ်မှောက်ကျသွားသည်။ မမမွန်အဖုတ်ထဲက ဆွဲဆွဲညှစ်တဲ့ ညှစ်အားကြောင့် အဖုတ်ထဲမှာတင်ပြီးသွားမှာစိုးလို့ မမမွန်ကို ကိုယ်ပေါ်ကတွန်းချပြီး ကမန်းကတန်းလီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ရသည်။ ”မမမွန် အမောလဲဖြေရင်းတစ်ချက်လောက်စုတ်လိုက်ပါဦး။ ပြီးတော့မှာမို့လို့။” မမမွန်လဲ လီးထိပ်ဖျားကို တစ်ချက်နှစ်ချက်စုတ်လိုက်ပြီးတော့ ရုတ်တရက် လီးတစ်ခေါင်းလုံးလည်ချောင်းထဲထိ ၀င်သွားအောင် ထိုးထည့်ပြီးစုတ်လိုက်သည်။ မမမွန်ရဲ့ ပညာစွမ်းအောက်မှာ ဖြိုးညီတစ်ယောက်ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်ပဲ ခေါင်းကိုဆွဲကိုင်ထားပြီး လည်ခေါင်းထဲကို သုတ်တွေပန်းထုတ်လိုက်သည်။ မမမွန်လဲ ပြန်မထွေးထုတ်တော့ပဲ သုက်တွေကိုတစ်ခါထဲ မျိုချလိုက်သည်။ ဖြိုးညီ မမမွန်ပါးစပ်ထဲကလီးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ မမမွန်မေးစေ့လေးကို လက်နဲ့ မပြီး မမမွန်မျက်နှာလေးကိုကြည့်မိသည်။
လီးက အာခေါင်ကိုထောင်ထားသည့် ဒဏ်ကြောင့်မျက်ရည်လေးတွေ ၀ဲနေတာတွေ့တော့ သနားမိပြန်သည်။ မမမွန် နဖူးလေးကိုညင်ညင်သာသာလေးနမ်းလိုက်သည်။ ” မမရယ် ချစ်မိပြီ။ ” ဖြိုးညီလည်း မမမွန်အခန်းထဲမှထွက်ကာ ဘောလုံးပွဲပြန်ကြည့်နေမိသည်။ မျက်လုံးက တီဗီဖန်သားပြင်ကိုကြည့်နေရသော်လည်းစိတ်မပါလှ။ မမမွန်၏ ဖြူဖွေးဝိုင်းစက်သောရင်သားများ၊ ဖောင်းတင်းနေသောအဖုတ်၊ နောက်ကိုကော့ကော့ ပေးတတ်သော တင်သားဝိုင်းဝိုင်းကြီးတို့ကိုသာမြင်ယောင်နေမိသည်။ ထို့ကြောင့် ဘောလုံးပွဲဆက်မကြည့်တော့ပဲ အခန်းထဲသို့သာပြန်အိပ်လိုက်သည်။ ဖြိုးညီ နောက်နေ့မနက်စောစောထပြီး မနက်စာကိုပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ ဈေးသွားလိုက်သည်။ ဈေးကပြန်လာတော့ မမမွန်နဲ့တွေ့သည်။ မျက်နှာနည်းနည်းပူနေတာကြောင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဘာမှမပြောမိပေ။ မနက်စာစားပြီးတော့ အရာရာကနဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်။ ထမင်းဝိုင်းတွင် ဖြိုးညီတစ်ယောက်မမမွန်ကို မျက်နှာပူနေမိသော်လည်း မမမွန်က ဘယ်လိုမှမဖြစ်သလိုနေသောကြောင့် စိတ်လက်ပေါ့ပါးသွားသည်။ မမမွန်ကို မနေ့ညကလိုအဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်အောင်နေတော့မည်ဟု ဖြိုးညီတစ်ယောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။ ထမင်းစားပြီးတော့ မမမွန်ကကိုချမ်းသာအတွက်ဆေးများကို မြို့ထဲတွင် သွားထုတ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်နေ့လည်လောက်မှပြန်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ နေ့လည်စာကိုလဲသူ့ကိုမစောင့်ရန်နှင့်ကိုချမ်းသာကိုလည်း နေ့လည်စာပြင်ပြီးကျွေးရန် သေသေချာချာပင်မှာပြီး ထွက်သွားသည်။ မနက်တစ်မနက်ခင်းလုံး ဖြိုးညီတစ်ယောက် စကိုင်းနက်ကလာတဲ့ တီဗီလိုင်းတွေကိုသာတစ်လိုင်းပြီးတစ်လိုင်းပြောင်းကြည့်ရင်းနဲ့ အချိန်ကုန်သွားသည်။ နေ့လည်စာစားချိန်ရောက်တဲ့အထိ မမမွန်ပြန်မရောက်သေးတာနဲ့ ယောက်ဖတော်ကို ထမင်းခူးခပ်ပြင်ဆင်ပြီးကျွေးလိုက်သည်။ ဖြိုးညီ ယောက်ဖနဲ့ထမင်းအတူတူစားရင်း ယောက်ဖမျက်နှာကို တစ်ချက်တစ်ချက်မသိမသာ ခိုးကြည့်မိသည်။ ဘာပဲပြောပြော ဖြိုးညီ ယောက်ဖကိုအားနာမိတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်သည်။ ဘာမှမသိတဲ့ယောက်ဖကတော့ ရောဂါကူးမှာမကြောက်ပဲသူနဲ့ထမင်းတူတူစားတဲ့ ဖြိုးညီကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းသာတဖွဖွပြောနေသည်။ထမင်းစားပြီး တအောင့်လောက်နေတော့ မမမွန် အပြင်သွားရာကပြန်လာသည်။ မမမွန်ရဲ့ မျက်နှာလှလှမှာ ချွေးစက်လေးတွေတွဲလွဲခိုနေသည်။ ဖြိုးညီ ကိုချမ်းသာနဲ့ ထိုင်စကားပြောရာကနေ အသာထပြီး မမမွန်ကို ရေတစ်ခွက်ခပ်တိုက်လိုက်သည်။ ”ကျေးဇူးပဲ မောင်လေးရာ…။ မမလည်း နေပူတာနဲ့ တော်တော်ပင်ပန်းလာတယ်။” ”ရပါတယ် မမရယ်။” ဖြိုးညီ တစ်ယောက် မမမွန်ကို မျက်နှာပူတာနဲ့ ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိပဲ ငြိမ်နေမိသည်။ ”မောင်လေး… ဘယ်တော့ပြန်မှာလဲ။ ကျောင်းပိတ်တယ်မလား။ ကြာကြာနေသွားပါလား။” ”ဟင့်အင်း….။ မနေတော့ဘူးမမ။ ကျွန်တော် ဒီညနေပဲပြန်တော့မယ်။” ဖြိုးညီ ညဘက်ကျရင် ဖြစ်လာမဲ့ ကိစ္စတွေကို ဆက်မဖြစ်ချင်တာနဲ့ ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ”တစ်ပတ်တန်သည်လောက်တော့ နေပါဦးလားငါ့မောင်ရယ်…။ မမလည်း ဒီမှာ နင့်အကိုနဲ့ မမအပြင်သွားရင် အိမ်စောင့်မရှိဘူး။” ”မဖြစ်ဘူးမမ။ ကျွန်တော် ဒီမှာဆက်ပြီးနေရင် မမနဲ့ ထပ်ပြီးမှားမိနေလိမ့်မယ်။
မနေ့ညက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူး။” ဖြိုးညီ ခေါင်းကိုငုံ့ထားရင်း ပြောလိုက်သည်။ ”အော် … မောင်လေးရယ်…။ ဒါက မတော်တဆဖြစ်သွားတာပဲဟာကို..။ ဘယ်လိုမှ စိတ်ထဲမထားနဲ့ကွာ။ နောက်ထပ် မဖြစ်ကြရင်ပြီးတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒီအတွက်နဲ့ ဆိုရင်တော့ မပြန်ပါနဲ့ မောင်လေးရယ်။” မမမွန် ဖြိုးညီရဲ့ ခေါင်းကဆံပင်တွေကို အသာပွတ်ရင်းပြောသည်။ ”မဟုတ်ဘူး မမမွန် …။ ဒီမှာ ဆက်ပြီးသွားရင် ကျွန်တော် မမကို မြင်နေရရင် ဘယ်လိုမှထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ပြန်ပါရစေ မမရာ ။ နော်….” ”ဟုတ်ပါပြီလေ။ ငါ့မောင်က အရမ်းပြန်ချင်နေတယ် ဆိုရင်တော့ မမ မတားတော့ပါဘူး။ ” ”အရမ်းပြန်ချင်တယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူးမမမွန်ရာ၊ တကယ်သာဆိုရင် ကျွန်တော်မမမွန်နဲ့ အမြဲတမ်းအတူတူနေချင်တာပါ။” ”…..” မမမွန်ဆီက ဘာစကားသံမှထွက်မလာတော့…။ မမမွန် မျက်လုံးရွဲကြီးတွေနဲ့ ဖြိုးညီကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ ဖြိုးညီ မမမွန်ရဲ့ အကြည့်ဒဏ်ကို ရင်မဆိုင်နိုင်တာ ကြောင့် ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ငုံ့ထားမိသည်။ ”ကဲ ….. ငါ့မောင်ပြန်မယ်ဆိုလည်းပြန်လေ။ အိမ်အတွက်ဘာဝယ်သွားဦးမလဲ။” မမမွန် နှစ်ယောက်ကြားက တိတ်ဆိတ်မှုကို အဆုံးသတ်လိုက်သည်။ ”မ၀ယ်တော့ဘူး မမ။ ကျွန်တော် အိမ်ရှေ့သွားတော့မယ်နော်။ ခိုင်းစရာရှိရင် အော်ခေါ်လိုက်ပါ မမ။” ”အေးအေး….။” ဖြိုးညီ အထုတ်တွေပြင်ဆင်ပြီး မမမွန်တို့ အိမ်ကနေ ပြန်လာခဲ့သည်။ ယောက်ဖဖြစ်သူကတော့ ဖြိုးညီကို မပြန်စေချင်သေး..။ နေမကောင်းဖြစ်နေသူအတွက် စကားပြောဖော်တစ်ယောက်လိုတယ်မဟုတ်ပါလား။ ဖြိုးညီ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မမမွန်အကြောင်းကို မေ့ပစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့သည်။ တစ်ရက် … နှစ်ရက်….. သုံးရက်…… တစ်လ …. တစ်လ ပြည့်ခါနီးအချိန်မှာ မမမွန်ဆီက ဖုန်းဝင်လာသည်။ ကြားရတဲ့သတင်းကတော့ စိတ်မကောင်းစရာ…။ ကိုချမ်းသာဆုံးပြီဆိုတဲ့ သတင်းပဲဖြစ်သည်။ ဒီလောက် ရောဂါဆိုးနေတာတောင် မမမွန်အလစ်မှာ ဆေးလိပ်ခိုးခိုးသောက်သည်ဟုဆိုသည်။ မနေ့ညက အိပ်နေရင် ရုတ်တရက်သွေးတွေအန်ပြီး တစ်ခါထဲ အသက်ပါ ပါသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြိုးညီတို့ တစ်အိမ်သားလုံး မမမွန် တို့ ရှိရာကို သွားကြသည်။ ဟိုရောက်တော့ မမမွန် မျက်နှာက ငိုထားလွန်းလို့ မို့အစ်နေသည်။ ဖြိုးညီ မမမွန်ကို ကြည့်ရင်း သနားမိသည်။ ငယ်ငယ်ချောချောလေးနဲ့ မုဆိုးမဖြစ်သွားရရှာပြီ။ ဆယ်ရက်လောက်အကြာ နာရေးကိစ္စတွေအားလုံးပြီးတော့ ဖြိုးညီအဖေနဲ့ အမေကတော့ အလုပ်ရှိလို့ဆိုပြီးပြန်သွားသည်။ ဖြိုးညီကိုတော့ မမမွန်တစ်ယောက်ထဲ ညရေးညတာ စောင့်ပေးရအောင်ဆိုပြီး ထားခဲ့သည်။ တစ်ကြိမ်ကြုံဖူးသော အဖြစ်အပျက်နဲ့ တူ တစ်အိမ်လုံးမှာ နှစ်ယောက်ထဲရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အသိက နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ ရင်ကို မသိမသာ လှုပ်ခတ်စေသည်။ ဖြိုးညီရော မမမွန်ရော တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မျက်လုံးချင်းမဆုံဖြစ်အောင် တမင်ကို ရှောင်လွှဲကြသည်။
ဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်သော လောကသဘာဝအရ ဖြိုးညီမိဘတွေပြန်သွားပြီး နောက်တစ်နေ့မှာတော့……..မနက်စောစော ဖြိုးညီမနက်စာစားဖို့ ပြင်ဆင်သည်။ ပြင်ဆင်သည်ဆိုတာထက် မနက်စားစားဖို့ အပြင်မှာသွားဝယ်ရန်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မမမွန်ကတော့မနိုးသေး။ ” ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက် ” မမနိုးပြီလား။ ”ပြောမောင်လေး ၊ ဘာကိတ်။” အခန်းထဲက အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ မမမွန်အသံထွက်ပေါ်လာသည်။ ”ကျွန်တော်အပြင်သွားမလို့ ၊ လမ်းထိပ်မှာ မုန့်ဟင်းခါးသွားဝယ်မလို့ ၊ အဲဒါ…” ”သွားဝယ်လေ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ။” ”မဟုတ်ဘူးလေ၊ အဲဒါ တံခါးဖွင့်ထားခဲ့ရမလားလို့။” ”မဖွင့်ခဲ့နဲ့လေ၊ မမွန်တစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့မှာဆိုတော့၊ အပြင်က သော့ခတ်သွားလိုက်၊” ”ဟုတ်ကဲ့ မမမွန် ၊ ဒါဆို ကျွန်တော်လစ်ပြီ၊ ဆက်အိပ်နေတော့။” မမမွန်အခန်းထဲက ဘာမှပြန်ဖြေသံမကြားတော့လို့ ဖြိုးညီ မုန့်ဟင်းခါးဝယ်ဖို့ထွက်လာခဲ့သည်။ တိုက်ခန်းထဲက အထွက်မှာ မမမွန်ပြောတဲ့အတိုင်း အပြင်ကနေသော့ခတ်ခဲ့သည်။ လမ်းထိပ်ကမုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ရောက်တော့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်မှာလူတွေကြပ်နေသည်။ ”အဒေါ်ကြီး ၊ မုန့်ဟင်းခါး ပါဆယ်နှစ်ပွဲလောက်မြန်မြန်လေး၊ ဗိုက်ဆာနေလို့ပါ။” ”ပါဆယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်နဲ့ ရဦးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီမှာ စားပွဲတွေကျနေလို့…။ ဗိုက်ဆာရင် ဒီမှာပဲ တစ်ခါထဲထိုင်စားသွားလေ။” ”ဒါဆိုလည်း ငါးဖယ်နဲ့ အိုးဘဲဥ ထည့်ဗျာ၊ အကြော်က ဘူးသီးကြော်ထည့်။” ဖြိုးညီ အနားကလွတ်နေတဲ့ခုံမှာအသာထိုင်စောင့်နေလိုက်သည်။ တအောင့်လောက်ကြာမှ သူမှာထားတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးရောက်လာသည်။ ဗိုက်တော်တော်ဆာနေတာနဲ့ နောက်ထပ်တစ်ပွဲထပ်မှာပြီးစားလိုက်သည်။ စားလို့ပြီးမှ မမမွန်အတွက် မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲပါဆယ်ထုတ်ပြီး ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။ မမမွန်တို့ တိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်တော့ အပြင်ကခတ်ထားတဲ့သော့ကိုဖွင့်ပြီး ၀င်ခဲ့သည်။ မုန့်ဟင်းခါးထုတ်ကို မီးဖိုခန်းအ၀က နံရံမှာချိတ်ထားလိုက်ပြီး အပေါ့သွားဖို့ အိမ်သာဆီလာခဲ့သည်။ မနက်စောစောအေးတာရော ၊ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်မှာ ရေနွေးကြမ်းတွေသောက်ခဲ့တာကြောင့်ရော ဖြိုးညီ တော်တော်လေး တင်းနေပြီ။ တင်းနေတယ်ဆိုတာက အပေါ့သွားချင်လို့ တော်တော်လေး ဆီးအိမ်တင်းနေပြီလို့ပြောတာဖြစ်သည်။ ဖြိုးညီ စေ့ထားတဲ့ အိမ်သာတံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်သည်။ ၀ုန်းကခနဲမြည်သံနဲ့ အတူ အိမ်သာတံခါးပွင့်သွားသည်။ အထဲမှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ဖြိုးညီ ကြောင်ပြီး ရပ်ကြည့်နေမိသည်။ မမမွန် အိမ်သာမှာဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေတာ။ အိမ်သာကအထဲဝင်ရင် လှေကားနှစ်ထစ်လောက်ထပ်တက်ရသည်။ အောက်ခြေထက်တော်တော်လေးမြင့်သည်လို့ပြောရမည်။
အထဲက မမမွန် အိမ်သာထဲမှာငိုက်နေရာကနေ အလန့်တကြားမော့ကြည့်သည်။ မမမွန်လည်း ဖြိုးညီကို ကြောင်ပြီးကြည့်နေတာနဲ့ ပေါင်ဂွကြားနေရာကို ပြန်မအုပ်မိပေ။ ထမိန်ကို အပေါ်ဆွဲတင်ထားတော့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားက အင်္ဂါစပ်ကြီးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသည်။ မမမွန်အဖုတ်ကြီးက ဖောင်းတင်းနေသည်။ အဖုတ် အပေါ်နားမှာ အမွှေးတွေက ရေးရေးလေးပေါက်နေသည်။ အသားဖြူသူမို့ အဖုတ်က ဖြူဖွေးပြီးဖောင်းတင်းနေသည်။ ဖြိုးညီ မမမွန် အဖုတ်ကြီးကို ကြောင်ငေးပြီးကြည့်နေတာတော်တော်ကြာသွားသည်။ မမမွန်အဖုတ်ကြီးကိုကြည့်ရင်း ၀တ်ထားတဲ့ပုဆိုးအောက်က ညီတော်မောင်ကလည်း ခေါင်းထောင်လာသည်။ ခဏလောက်ကြာမှ မမမွန် ပေါင်ဂွကြားကို ထမိန်နဲ့ ပြန်ဖုံးလိုက်သည်။ ”တံခါးပြန်ပိတ်လေ မောင်လေးရဲ့… ” မမမွန်ရဲ့ အသံတွေက တုန်ခါနေသည်။ အဲဒီတော့မှ ဖြိုးညီလည်း သတိဝင်လာပြီး တံခါးပြန်ပိတ်လိုက်သည်။ ”မမမွန် ဆောရီးနော်… ” အသံကိုထိန်းပြီးပြောလိုက်ပေမဲ့ ဖြိုးညီအသံတွေလည်း တုန်ခါနေမှာသေချာသည်။ ဖြိုးညီ မီးဖိုခန်းထဲမှာ မမမွန်မုန့်ဟင်းခါးစားဖို့ ပြင်ဆင်နေရပေမဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ မမမွန်ရဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကိုပဲမြင်ယောင်နေသည်။ အောက်ကညီတော်မောင်ကလည်း မမမွန် အဖုတ်လှလှကြီးကိုမြင်လိုက်ရလို့ တောင်းဆိုနေပြီ။ မမမွန် အိမ်သာထဲကတော်တော်နဲ့ ထွက်မလာသေးဘူး။ ဖြိုးညီ အိမ်သာတံခါးဝကို ခဏခဏလှည့်ကြည့်နေမိသည်။ တအောင့်လောက်ကြာမှ မမမွန် ထွက်လာသည်။ အိမ်သာနဲ့ ကပ်ရက်ရေချိုးခန်းလေးထဲမှာ မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်၊ ကိုယ်လက်သန့်စင်နေသည်။ ရေချိုးခန်းတံခါးဖွင့်ထားတာကြောင့် မမမွန်ရေချိုးခန်းထဲမှာ လုပ်နေတာတွေကို မြင်ရသည်။ မမမွန် ခါးလေးကုန်းပြီး မျက်နှာသစ်နေတာကြောင့် တင်ပါးကြီးတွေက နောက်ဘက်ကို ကော့ထွက်နေသည်။ မမမွန်ရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှကို ကြည့်ရင်းဖြိုးညီ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ …။ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်လိုက်မိပြီ။ ဖြိုးညီရေချိုးခန်းထဲကို ဘယ်လိုခြေလှမ်းလှမ်းပြီးသွားလိုက်လဲမသိလောက်အောင်ပဲ ရေချိုးခန်းထဲကို လှစ်ခနဲရောက်သွားသည်။ ကုန်းပြီး မျက်နှာသစ်နေတဲ့ မမမွန်ရဲ့ နောက်ကြောကို သိုင်းဖက်လိုက်မိသည်။ ”အို့… ကိုဖြိုး….” မမမွန် မျက်နှာသစ်ရာကနေ အလန့်တကြားထအော်သည်။ ကုန်းထားတဲ့ခါးကို ပြန်ကော့တင်လိုက်တာမို့ မမမွန်တစ်ကိုယ်လုံးက ဖြိုးညီရင်ခွင်ထဲရောက်လာပြီ။ မမမွန်ရဲ့ ဖင်ကြီးနှစ်လုံးရဲ့ ဖြိုးညီ ပုဆိုးအောက်က အတန်ကြီးနဲ့ ထောက်မိနေပြီ။ ဖြိုးညီ စိတ်တွေအတော်ပဲထကြွလာပြီ။ အချိန်မဆွဲတော့ပဲ မမမွန်ရဲ့ ထဘီလေးကို ချွတ်ချလိုက်သည်။
မမမွန် ထဘီကို ဆွဲထားပေမဲ့ လက်တစ်ဘက်က ရေခွက်ကို ကိုင်ထားတာကြောင့် မမီလိုက်တော့ဘူး။ ည၀တ်အိပ်တဲ့ ထမိန်အနွမ်းလေးက ရေချိုးခန်းကြမ်းပင်ပေါ်မှာပုံလျက်လေးကျသွားပြီ။ ဖြိုးညီလည်းဝတ်ထားတဲ့ ပုဆိုးကို ခြေမနဲ့ ညှပ်ပြီး အမြန်ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ အောက်က ထောင်နေပြီးတဲ့ အတန်ကြီးက တရမ်းရမ်းနဲ့ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဖြိုးညီ ဒူးကို အလိုက်သင့်လေးကွေးလိုက်ပြီးတော့ မမမွန်ရဲ့ ပေါင်ကြားထဲက အဖုတ်အကွဲကြောင်းနေရာကို သူ့အတန်နဲ့တေ့ပြီး အသာထိုးထည့်လိုက်သည်။ မမမွန် သန့်စင်ခန်းထဲက ထွက်လာကာစမို့ အဖုတ်က ခြောက်ကပ်မနေပဲ အနည်းငယ်စိုနေသည်။ ဖြိုးညီရဲ့ အတန်ကြီးက မမမွန်အဖုတ်လေးထဲကို တရစ်ရစ်နဲ့တိုးဝင်သွားသည်။ မမမွန် အဖုတ်အတွင်းသားတွေက နူးညံ့လှသည်။ ဖြိုးညီ အချိန်မဆွဲတော့ပဲ မမမွန်ကို ရေကန်ဘောင်မှာ လက်ထောက်ခိုင်းပြီး နောက်ကနေဆောင့်တော့သည်။ ကားစွင့်နေတဲ့ တင်ပါး အထက်က ခါးသိမ်သိမ်လေးကို စုံကိုင်ပြီးဆောင့်သည်။ ဖြိုးညီဆီးခုံနဲ့ မမမွန် တင်ပါးဆောင့်သံတဖောင်းဖောင်းက ရေချိုးခန်းထဲမှာဆူညံနေသည်။ တအောင့်လောက်ကြာတော့ ဖြိုးညီ ဆက်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ညီတော်မောင်ကို အဖုတ်ထဲအဆုံးထိထိုးထည့်လိုက်ပြီး အောင်းထားတဲ့ အရည်တွေ တဖျောဖျောနဲ့ ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။ ဖြိုးညီ သူ့ညီတော်မောင်ကို မမမွန်အဖုတ်လေးကထဲပြန်မထုတ်သေးပဲ စိမ်ထားလိုက်သည်။ မမမွန်အဖုတ်အတွင်းသားတွေက တရွရွနဲ့ ဖြိုးညီဟာကို ဆုတ်ညှစ်နေကြသည်။ုဖြိုးညီ မမမွန်ကို နောက်ကနေသိုင်းဖက်ရင်း အမောဖြေနေမိသည်။ ခဏလောက်ကြာမှ မမမွန်ဆီက စကားသံထွက်လာသည်။ ”ကိုဖြိုး အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ…။ လူကို ဘာမပြောညာမပြောနဲ့။” ”ချစ်လို့ပါ မမရယ်…။ ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုမဖြစ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းတာပဲ။ စောစောက မမမွန်ကို မြင်လိုက်ပြီး ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး။ ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။” ”တောင်းပန်တယ်နော် မမ။” ”လုပ်တုန်းကလုပ်ပြီးတော့မှ လာတောင်းပန်နေသေးတယ်။ ” ”ဒီမှာပေပွကုန်ပြီ ၊ ရေချိုးမှရတော့မယ်။” ”ကျနော်လည်း ရေချိုးလိုက်မယ်လေ။ မမမွန်နဲ့ တစ်ခါထဲ အတူတူချိုးလိုက်မယ်။” ဖြိုးညီပါးစပ်ကပြောလိုက်ရင်း လက်ကလည်း ၀တ်ထားတဲ့ တီရှပ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ”မမလဲချွတ် …၊ ခဏလေး၊ ကျွန်တော်ချွတ်ပေးမယ်။” မမမွန်ရဲ့ အကျီကြယ်သီးတွေကို နောက်နေဆွဲဖြုတ်လိုက်သည်။ နှိပ်ကြယ်သီးဆိုတော့ တစ်ချက်ဆွဲလိုက်ရုံနဲ့ တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ပြုတ်ထွက်သွားသည်။ မမမွန် ရေကန်ဘောင်ကို လက်ထောက်ထားရာကနေ ထပြီး ခါးကို ပြန်မတ်လိုက်တော့ အဖုတ်ထဲစိမ်ထားတဲ့ ဖြိုးညီအတန်ကြီးက ဗွတ်ခနဲမြည်ပြီး ထွက်သွားသည်။ ဖြိုးညီ ပန်းထုတ်ထားတဲ့ သုတ်ရည်တွေက အဖုတ်ထဲကနေ တစ်စက်စက်နဲ့ ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်ကျလာသည်။
”ချွတ်တော့လေ…။” မမမွန် လက်နှစ်ဘက်ကို အောက်စိုက်ရင်း မကားတကားလေးလုပ်ပေးရင်းပြောသည်။ ဖြိုးညီလည်း နောက်ဘက်ကနေပဲ အကျီကို အသာထိန်းပြီးချွတ်လိုက်သည်။ အကျီကျွတ်အသွားမှာတော့ မမမွန်ရဲ့ ဖြူဖွေးပြီး ၀င်းဝါစိုပြေနေတဲ့ ကျောပြင်တစ်ခုလုံးကပေါ်ထွက်လာသည်။ ဖြိုးညီ ခေါင်းကို ငုံ့ပြီး မမမွန်ကျောကုန်းကို ငုံစုတ်လိုက်သည်။ ”ပြွတ်……” အသံထွက်အောင်ခပ်ကြမ်းကြမ်းစုတ်လိုက်တော့ ဖြူဖွေးနေတဲ့ မမမွန်ကြောပြင်မှာ အနီကွက်တစ်ခုပေါ်လာသည်။ ”မမ …ဒီဘက်လှည့်….” မမမွန် လက်နှစ်ဘက်ကို အသာယှက်ရင်း ဖြိုးညီဘက်ကို လှည့်လာသည်။ ဖြိုးညီ နို့နှစ်လုံးပေါ်မှာကာထားတဲ့ မမမွန်ရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို ကိုင်ပြီး ဘေးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ”၀ှား…. လှလိုက်တာမမရယ်။ ” လက်ဖယ်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ မမမွန်ရဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုကြည့်ရင်း ဖြိုးညီ ရေရွတ်မိသည်။ ဖြိုးညီ ရေချိုးဖို့ စဉ်းစားထားပေမဲ့ အရမ်းလှလွန်းတဲ့ မမမွန်ရဲ့ ရင်သားအစုံကို ကြည့်ရင်း စိတ်မထိန်းနိုင်တော့..။ ခေါင်းကို အသာငုံ့ရင်း နို့သီးခေါင်း နီညိုညိုလေးတွေကို ငုံပြီး စုတ်မိပြန်ပြီ။ …”အို့….. ကိုထက် … ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲကွာ….၊ ရေချိုးရအောင်နော်….။” မမမွန်ရဲ့ အသံတွေက တုန်ခါနေသည်။ ဖြိုးညီ …. မမမွန်ရဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးဆီကနေသူ့မျက်နှာကို ခွာလိုက်တော့သည်။ ဒါမှ မြန်မြန်ရေချိုးပြီးရင်အခန်းထဲမှာ အားရပါးရလုပ်ရမှာ မဟုတ်ပါလား။ ဖြိုးညီတစ်ယောက်မမမွန်ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို အားရပါးရကိုင်တွယ်ပွတ်သတ်ရင်း ရေချိုးပေးသလို မမမွန်ကလည်း ဖြိုးညီတစ်ကိုယ်လုံးကို သေချာဆပ်ပြာတိုက်ပြီးရေချိုးပေးသည်။ မမမွန်တစ်ယောက် မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ ဖြိုးညီရဲ့ ခြေရင်းမှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရင်း ဖြိုးညီပေါင်တွေကို ဆပ်ပြာတိုက်ပေးနေသည်။ မမမွန်စိတ်ထဲမှာ ဖြိုးညီအပေါ် မောင်လေးတစ်ယောက်လိုချစ်တဲ့ စိတ်အပြင် ချစ်သူတစ်ယောက်ကိုတွယ်တာတဲ့ စိတ်တွေပါ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ မောင်နှမတွေမို့ မဖြစ်သင့်ဟုစိတ်ထဲက ထိန်းနေသော်လည်း အစစအရာရာသူမအပေါ် အလိုက်တသိကူညီပေးသော ဖြိုးညီအပေါ်လည်း သူမနဲ့မပတ်သက်မိအောင် ပစ်ပစ်ခါခါမပြောနိုင်သည်က မွန်မွန့်ဘက်ကအားနည်းချက်ပင်…။ အခုလည်းကြည့် … ၊ သူမက ကိုယ့်မောင်လေးမို့ ယုယုယယနဲ့ သူ့ပေါင်တွေကို ဆပ်ပြာတိုက်ပေးနေတာကို ကိုယ်တော်ချောက ကိုယ့်အမကိုယ်ပစ်မှားနေပြန်ပြီ။ ”ကိုဖြိုးကွာ…. အရမ်းဆိုးတာပဲ…။” တောင်နေတဲ့ ဖြိုးညီရဲ့ အတန်ကြီးကို လက်နဲ့ ခပ်သာသာပုတ်ရင်းပြောသည်။ ”မမ…. စုတ်ပေးပါလား….” ”အာ…. တော်တော့ကွာ… ရေချိုးပြီး အခန်းထဲရောက်မှ…. နော်နော်…. ” သူ့ကို မျက်လုံးလေးဝင့်ကြည့်ရင်းပြောနေတဲ့ မမမွန်မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်း အရမ်းချစ်လာတာနဲ့ ဖြိုးညီ တစ်ယောက် မမမွန်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူအိအိလေးကိုငုံ့ပြီးနမ်းလိုက်သည်။ အနမ်းတွေကတော်တော်နဲ့မရပ်….၊ ကြာသည်။ နှုတ်ခမ်းချင်း ကွာသွားတဲ့အချိန်မှာ မမမွန်က… ”တော်တော့ကွာ…. အခန်းထဲရောက်မှ မောင်လေးစိတ်တိုင်းကျလုပ်ပါဆို….။” ”ဟုတ်ပါပြီမမရယ်….၊ ညီလေးကိုတစ်ချက်လောက် Kiss ပေးပါဦး…။” ဖြိုးညီ ဆပ်ပြာမြုပ်တွေနဲ့ တယမ်းယမ်းဖြစ်နေတဲ့ သူ့အတန်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်းပြောလိုက်သည်။ မမမွန် ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲ ဖြိုးညီအတန်ပေါ်က ဆပ်ပြာမြုပ်တွေကို ရေနဲ့သေချာပြောင်အောင်ဆေးပြီး ပါးစပ်လေးနဲ့ သုံးလေးငါးချက်လောက်စုတ်ပေးသည်။ ”အား…. ကောင်းလိုက်တာမမရယ်။” ဖြိုးညီ မမမွန်ကို လုပ်ချင်စိတ်တွေ တော်တော်လေးပြင်းပြနေတာနဲ့ ရေကိုခပ်မြန်မြန်ချိုးပြီး အိပ်ခန်းထဲဝင်မိတော့သည်။ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ရေတောင်ပြောင်အောင်မသုတ်အား…. နှစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ်ကိုရောက်သွားလေပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ နှစ်ဦးသားတိုင်ပင်စရာတောင်မလိုပဲ 69 ပုံစံနဲ့ လုပ်ကြသည်။
ဖြိုးညီရဲ့ လိင်တန်ထွားထွားကြီးကို မမမွန်က အားရပါးရစုတ်ပေးနေသလို မမမွန်ရဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို လည်း ဖြိုးညီ အားရပါးရလျက်ပေးနေသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ မမမွန်ရဲ့ အားပါတဲ့စုတ်ချက်တွေကြောင့်ဖြိုးညီတစ်ယောက် မမမွန်အဖုတ်ကိုတောင်ကောင်းကောင်းမလျက်နိုင်တော့ပဲရပ်ထားရသည်။ မမမွန် ရဲ့ အစိလေးကို ဖြိုးညီ လျှာနဲ့ ခပ်နာနာစုတ်ပေးလိုက်ရင်လည်း မမမွန်ဆီက တရှီးရှီးနဲ့ ငြီးသံတွေ ထွက်လာတတ်သည်။ နှစ်ယောက်သား အားရအောင် စုတ်ပေးလျက်ပေးပြီးတော့မှ မမမွန်က အပေါ်ကနေပြီး အားရပါးရ တက်ခွပြီးဆောင့်ပေးပြန်သည်။ မမမွန်တစ်ယောက် ဆံပင်ရှည်လေးတွေကို ဘယ်ညာရမ်းရင်း ဖြိုးညီပေါ်မှ မြင်းစီးပေးနေပုံက အားရစရာ…။ ဖြိုးညီ မမမွန်ရဲ့ နို့အုံဆူဆူဖြိုးဖြိုးကြီးတွေကို အားရပါးရ ဆုတ်ကိုင်ညှစ်ရင်း မမမွန်ရဲ့ အပေါ်က ဆောင့်ချက်တွေကို အရသာခံနေမိသည်။ တော်တော်ကြာလို့ မမမွန် မောလာပြီဆိုမှ ဖြိုးညီ မမမွန်ကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီး နောက်ကနေအားရပါးရဆောင့်ပြီး ပြီးလိုက်တော့သည်။ ဖြိုးညီ မမမွန်အိမ်မှာ စောင့်အိပ်တဲ့ တစ်ပတ်လုံးလိုလို အိမ်အလုပ်တွေပြီးတာနဲ့ ထမင်းစားသောက်ပြီး အိပ်ရာပေါ်မှာပဲ အချိန်ကုန်လေ့ရှိသည်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် တစ်ပတ်လုံးလိုလို ဖြိုးညီနဲ့ မမမွန်လုပ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခါတလေ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်တောင် ဖြိုးညီပေါင်ပေါ်မှာ မမမွန်က တက်ထိုင်ပြီး မမမွန်ရဲ့ နို့ကြီးတွေကို ဖြိုးညီက ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့တစ်လျောက်လုံးလိုလို ထိုင်ပြီးညှစ်နေတတ်သည်။ မမမွန်ရဲ့ တင်သားအိအိထွားထွားတွေကလည်းဖြိုးညီပေါင်ကြားထဲမှာ မာနေတဲ့ အတန်ကြီးပေါ်မှာ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ဖြစ်နေတတ်ပြီး ပေါင်ကြားထဲမှာ အရည်တွေ ရွှဲရွှဲစိုနေတတ်သည်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်ပြီးတာနဲ့ နှစ်ယောက်လုံးကုတင်ပေါ်ကို အမြန်ပြေးတက်ပြီး မီးကုန်ယမ်းကုန် လိုးဖြစ်ကြသည်။ ဒီလိုနဲ့ သင်္ကြန်ကျောင်းပိတ်ချိန်တွေပြီးလို့ဖြိုးညီကျောင်းပြန်တက်ရတော့မည်။ ဖြိုးညီပြန်ခါနီးရက်မှာ ဖြိုးညီနဲ့ မမမွန် တစ်နေ့လုံးလိုလိုလုပ်ဖြစ်ကြသည်။ ထမင်းဟင်းတောင် မချက်တော့ပဲ ဆိုင်ကနေ ပါဆယ်ဝယ်စားသည်။ တစ်နေ့လုံးလိုလိုနှစ်ယောက်လုံးအ၀တ်အစားမကပ်ကြ၊ မမမွန်ကလည်း အိမ်ထဲမှာကိုယ်လုံးတုံးနဲ့နေသည်။ ဖြိုးညီကလည်း ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ အောက်ကအတန်ကြီးတယမ်းယမ်းနဲ့။ တစ်နေ့လုံး အချီပေါင်းအများကြီးလုပ်နိုင်တဲ့ ဖြိုးညီကို အရမ်းသန်တာပဲလို့ မမမွန်က အောချရတဲ့အထိပါပဲ။ နောက်ဆုံးပြန်ခါနီး နှစ်ယောက်သားအားရအောင်လုပ်ပြီးလို့ ဖြိုးညီရင်ခွင်ထဲမှာ မမမွန်မျက်နှာလေးအပ်ပြီးအိပ်နေသည်။ ဖြိုးညီ မမမွန်ရဲ့ နဖူးပေါ်မှာ ၀ဲကျနေတဲ့ ဆံနွယ်စလေးတွေကို သပ်တင်ပေးရင်း ပြောလိုက်သည်။ ”မမ…. တကယ်လို့ သင့်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်က လာကမ်းလှမ်းတယ်ဆိုရင်နောက်အိမ်ထောင်ပြုပါလားဟင်…။ မိန်းမသားဆိုတာ တစ်ယောက်ထဲနေလို့မကောင်းဘူးမမရဲ့…။” ”အင်းပါ….၊ အဲဒါကို မမလည်းတွေးမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မမ ငါ့မောင်မသိဘဲ ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ နောက်အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီလူကိုငါ့မောင်နဲ့ပေးတွေ့ပြီး ငါ့မောင်သဘောတူမှပဲ ယူမယ်ကွာ..။” ”ဒါမှ ငါ့မမ…။” ဖြိုးညီ မမမွန်ရဲ့ နဖူးလေးကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးနမ်းမိသည်။ ဖြိုးညီ အရမ်းချစ်ရတဲ့ မမမွန်ကို တခြားလူတစ်ယောက်ရင်ခွင်ထဲမှာ မမြင်ရက်သလိုလိုဖြစ်နေသည်။
စိတ်ကူးထဲမှာ တွေးကြည့်တာတောင် ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်လာသလိုလိုကြီးဖြစ်နေရသည်။ ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းတွေဖွင့်လို့ ဖြိုးညီလည်း ကျောင်းဆက်တက်ဖြစ်သည်။ မမမွန်နဲ့ကတော့ အဆက်အသွယ်မပြတ် ၊ ညတိုင်းလိုလို ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာတွေ့ပြီးချက်ဖြစ်သည်။ ခြောက်လလောက်ကြာတော့ မမမွန်က သူ့ကို အွန်လိုင်းမှာတွေ့ပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းထားသူ တစ်ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောလာသည်။ နာမည်က ကိုသုတလို့ဆိုသည်။ အသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့လူပျိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလည်း အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောသည်။ ဖြိုးညီကလည်း တွေ့ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ အဲဒီလူကို မမမွန်အိမ်မှာချိန်းခိုင်းလိုက်သည်။ ဖြိုးညီလည်း မန္တလေးကနေ ရန်ကုန်ကို ညကားစီးပြီး မမမွန်အိမ်ကိုသွားသည်။ မမမွန်ရဲ့ ခင်ပွန်းလောင်းကြီးကို ရင်နာနာ နဲ့ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ဖြစ်သည်။ မနက်အစောကြီး မမမွန်နေတဲ့တိုက်ခန်းကိုရောက်တော့ ခရီးပန်းလာတာနဲ့ တစ်ရေးတမောအိပ်လိုက်သည်။ ”မောင်လေး …. ထ…. ထ….. ကိုသုတ လာပြီ…။ ” ဖြိုးညီ အိပ်နေရာကနေ ကမန်းကတန်းထပြီး အိပ်ခန်းထဲကနေ ဧည့်ခန်းရှိရာကိုချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ”ဟာ….. မဗိုက်….” ဖြိုးညီ ကိုသုတဆိုတဲ့ လူကြီးကို ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းတွေ့ဖူးသလိုဖြစ်လာတာနဲ့သေချာတွေးကြည့်တော့မှ ကြီးမိုက်ဗိုက်ပူဆိုတဲ့ လူကြီးဖြစ်နေသည်။ သူနဲ့ ကြီးမိုက်ဗိုက်ပူ အပြင်မှာ မတွေ့ဖူးသေးသော်လည်း ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ မမြင်ချင်မှ အဆုံးမြင်မြင်နေရတဲ့ ဒီမျက်နှာကြီးကိုတော့ သေသေချာချာမှတ်မိနေသည်။ ဖြိုးညီ အိပ်ခန်းနံရံက အပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ ဒီလူကြီး မမမွန်ဖျော်တိုက်တဲ့ ကော်ဖီသောက်ရင်း မမမွန်ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေသည်။ မမမွန်လည်း ခဏလေးနော် ဆိုပြီး ဖြိုးညီအိပ်ခန်းထဲဝင်လာသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ဘယ်လိုနေလဲဆိုပြီး တိုးတိုးလေးမေးသည်။ ဖြိုးညီလည်း မဆိုးပါဘူးဆိုပြီး ရင်နာနာနဲ့ပဲ ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ရသည်။ မမမွန် အပြင်ကို ပြန်သွားပြီး ကိုသုတဆိုတဲ့ လူကြီးပြောတာကို လက်ခံတဲ့အနေနဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တာကိုတွေ့ရသည်။ ဒီလူကြီးက လက်ခံတယ်ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ မမမွန်အနားကိုတိုးကပ်ပြီး မမမွန်ကို ဆွဲဖက်သည်။ ပြီးတော့ မမမွန်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းသည်။ လက်တွေကလည်း မမမွန် ကိုယ်လုံးပေါ်မှာ တရွရွနဲ့ ပြေးလွှားပြီးပွတ်သတ်နေသည်။ ဖြိုးညီ ဒီမြင်ကွင်းကို မမြင်ချင်ပေမဲ့ ဘယ်လိုကြောင့်မှန်းမသိ ၊ မျက်လုံးအစုံကို လွှဲဖယ်လို့မရပဲ ဆက်ပြီးကြည့်နေမိသည်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုသုတရဲ့လက်တွေက မမမွန် ရင်အစုံပေါ်မှာအုပ်ကိုင်ပြီး ဆုတ်နယ်နေသည်။ တအောင့်လောက်ကြာတော့ မမမွန်ရဲ့ အကျီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ ရင်သားအစုံကိုဘော်လီပေါ်ကနေ ကိုင်သည်။ ပြီးနောက် မမမွန်ရဲ့ဘော်လီကိုချွတ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ နို့အုံဖွေးဖွေးကို စို့သည်။ မမမွန်လည်း ခေါင်းကို အပေါ်မော့ပြီး မျက်လုံးလေးမှေးနေသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက်ဖြိုးညီချောင်းကြည့်တဲ့ အပေါက်ရှိရာကိုလှည့်လှည့်ကြည့်သည်။ ဖြိုးညီနဲ့ မမမွန်နဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံသွားတဲ့အခါတိုင်း မမမွန်ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ သူ့ကိုအားနာတဲ့အကြည့်တွေပါတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရသည်။ တအောင့်လောက်ကြာတော့ ကိုသုတရဲ့လက်တွေက မမမွန်ရဲ့ ထဘီလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့သည်။ မမမွန်ရဲ့ ပေါင်သားဖွေးဖွေးနဲ့ ပေါင်ကြားထဲက အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကပေါ်လာသည်။ ကိုသုတ သူ့ပုဆိုးကို ခပ်သွက်သွက်ဆွဲချွတ်ပြီး မမမွန်ရဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အသာဖြဲကားပြီး သူ့ရဲ့ ညိုညိုတုတ်တုတ် အတန်ကြီးကိုထိုးထည့်လိုက်တော့သည်။ ဖြိုးညီ တစ်ယောက် ကိုသုတရဲ့ အတန်ညိုတုတ်တုတ်ကြီး မမမွန်ရဲ့ အဖုတ်လေးထဲမှာ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ၀င်ထွက်နေတာကိုကြည့်ရင်း တစ်ဖက်ကလည်း နှမြောနေမိသလို တစ်ဖက်ကလည်း လိင်စိတ်တွေထကြွနေတော့သည်။ ဆိုဖာပေါ်မှာ မမမွန်ကို တော်တော်လေးကြာအောင် တဖွတ်ဖွတ်နဲ့လိုးပြီး ကိုသုတပြီးသွားသည်။ တအောင့်လောက်ကြာတော့ နှစ်ယောက်သားအ၀တ်အစားတွေပြန်ဝတ် စကားနည်းနည်းပါးပါးပြောပြီး ကိုသုတပြန်သွားသည်။ ကိုသုတပြန်ပြီးပြီးချင်းပဲ ဖြိုးညီ အိပ်ခန်းထဲကနေထွက်ပြီး မမမွန်ဆီကို သွားလိုက်သည်။ ဖြိုးညီကိုတွေ့တော့ မမမွန် ဖြိုးညီကိုကြည့်ရင်းမျက်ရည်တွေဝဲလာသည်။ သူ့မောင်လေးရှေ့မှာ တစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ကာမဆက်ဆံလိုက်တာကို ရှက်တာပဲလား၊ မောင်လေးတစ်ယောက်လိုရော ချစ်သူလိုပါချစ်တဲ့ ဖြိုးညီရှေ့မှာ ဒီလိုလုပ်ရပ် လုပ်မိတာကို ၀မ်းနည်းတာလားဆိုတာကိုတော့ မမမွန်ကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလိမ့်မည်။ မမမွန်ရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို ဖြိုးညီအသာပွေ့ဖက်လိုက်သည်။ ဖြိုးညီရင်ခွင်ထဲရောက်မှ မမမွန်တစ်ယောက် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုတော့သည်။ ဖြိုးညီ မမမွန်ရဲ့မေးလေးကို လက်နဲ့ အသာမော့ရင်း မမမွန်ရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းလိုက်သည်။ ဖြိုးညီ တစ်ယောက် ကိုသုတနဲ့ မမမွန်တို့ ကာမစပ်ယှက်နေတာကိုချောင်းကြည့်နေကတည်းက စိတ်တွေထကြွခဲ့သည်။ အခုလို မမမွန်နဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းမိတဲ့အချိန်မှာတော့ စိတ်ကို ထိန်းထားလို့မရတော့..။ မမမွန်ရဲ့ ထမိန်လေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်သလို သူဝတ်ထားတဲ့ ပုဆိုးကိုလဲ ခြေထောက်နဲ့ညှပ်ပြီး ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ထမိန်ကျွတ်သွားလို့ အောက်ပိုင်းမှာ ဗလာဟင်းလင်းနဲ့ ဖင်ပြောင်လေးဖြစ်သွားတဲ့ မမမွန်ကို ချီမပြီး အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်ကို ခေါ်လာခဲ့သည်။ ကုတင်ပေါ်မှာ မမမွန်ကို ပက်လက်လေးထားလိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို လက်နဲ့ဖြဲကားလိုက်ပြီး ပေါင်ကြားထဲမှာပေါ်လာတဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲကို ထိုးသွင်းဖို့ ဖြိုးညီတစ်ယောက်သူ့ အတန်ကြီးနဲ့ တေ့နေဆဲ မမမွန်က…. ”ကိုဖြိုး….. ခဏနေဦးကွာ… ဟိုတစ်ယောက်အရည်တွေနဲ့… မမွန် ရေသွားဆေးလိုက်ဦးမယ်။” ”မအောင့်နိုင်တော့ဘူးမရာ…. ကျွန်တော်လုပ်တော့မယ်…။
” ဖြိုးညီတစ်ယောက် ဆေးမိနေသူတစ်ယောက်လို ဗလုံးဗထွေးပြောရင်း ပထမတစ်ယောက်လုပ်ထားလို့ သုတ်ရည်ဖြူဖြူတွေပေကျံနေတဲ့ အဖုတ်ဝမှာ သူ့အတန်ကိုတေ့ပြီးထိုးထည့်လိုက်သည်။ ကိုသုတရဲ့ သုတ်ရည်တွေနဲ့ ချောမွေ့နေတဲ့ မမမွန်ရဲ့ အဖုတ်ကြီးက အရမ်းကြီးတင်းကြပ်မနေပေမဲ့ မမမွန်နဲ့ လပေါင်းများစွာခွဲထားရတဲ့ ဖြိုးညီအတွက်တော့ လုပ်လို့ကောင်းလှသည်။ ဖြိုးညီတစ်ယောက် ၀မ်းနည်းစိတ်နဲ့လိင်စိတ် ပေါင်းစပ်ပြီး မမမွန်ရဲ့ အဖုတ်ကိုသာ အပေါ်ကနေ နာနာဖိပြီးဆောင့်ဆောင့်လိုးနေမိသည်။ မမမွန်ကတော့ ဖြိုးညီလုပ်သမျှ ….. တအီးအီးနဲ့ ငြီးငြူရင်းအောက်ကနေ့ ကော့ကော့တင်ပေးရှာသည်။ ဖြိုးညီ မမမွန်ရဲ့ ရင်သားထွားထွားတွေကို လက်နဲ့ညှစ်ရင်း တဖောင်းဖောင်းမြည်အောင် ဆောင့် –ိုးပြီး မမမွန်အဖုတ်ထဲမှာ သုတ်ရည်တွေပန်းထုတ်ရင်းတစ်ချီပြီးသွားတော့သည်။ ဖြိုးညီ တစ်နေ့လုံးလိုလို မမမွန်နဲ့ သုံးလေးချီထက်မနည်း လုပ်ပြီး ပြန်လာခဲ့သည်။တစ်လလောက်ကြာတော့ မမမွန်ဆီက ဖုန်းဝင်လာသည်။ ကိုသုတနဲ့ လက်ထပ်တော့မည်။ ဖြိုးညီကိုလည်းလာစေချင်သည်တဲ့…။ ဖြိုးညီတစ်ယောက် မမမွန်ဆီ ကိုသွားရပြန်သည်။ ဖြိုးညီ မင်္ဂလာဆောင်မတိုင်ခင် ရှေ့တစ်ရက်မှာ မမမွန်ဆီရောက်သွားသည်။ ဖြိုးညီရဲ့ အဒေါ်တို့လင်မယား… မမမွန်ရဲ့ အဖေနဲ့အမေလည်းရောက်နေကြပြီ။ ဖြိုးညီနဲ့ မမမွန် မောင်နှမနှစ်ဦးသားကားတစ်စီးနဲ့ မြို့ထဲမှာ ဖိတ်စာတွေလျောက်ဝေကြသည်။ ဖိတ်စာတွေဝေပြီး အပြန်လမ်းမှာ ဖြိုးညီ တစ်ယောက်ကားမောင်းရင်းနဲ့ မမမွန်ကိုမေးမိသည်။ ”မမ….ကျွန်နော်မရှိတုန်း ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ထပ်ပြီး ဖြစ်သေးလားဟင်….။” မမမွန် ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ဘက်ကို အဓိပ္ပာယ်မဲ့စွာ ငေးကြည့်နေသည်။ တအောင့်လောက်ကြာမှ….. ဖြိုးညီရဲ့ အမေးကို မမမွန်ပြန်ဖြေသည်။ ”မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးကွာ….၊ မမွန် ထပ်မဖြစ်အောင် ရှောင်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ကိစ္စအတွက်လည်း ငါ့မောင်ကို အရမ်းအားနာတယ်၊ တောင်းပန်တယ်နော်…၊ မောင်လေး…။” ”ရပါတယ်မမွန်ရယ်၊ ဒါပေမဲ့ လက်မထပ်ခင် မမွန်ကို တစ်ခါလောက် ချစ်ချင်သေးတယ်။ ခွင့်ပြုပါလားဟင်…။” ”မတော်ပါဘူးငါ့မောင်ရယ်…၊ မမွန်က မနက်ဖြန် မင်္ဂလာဆောင်ရတော့မှာကိုကွာ…။” ”ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပါပဲ မမရယ်….၊ ခွင့်ပြုပါနော်….။” မောင်လေး ဖြိုးညီရဲ့ သနားစရာတောင်းဆိုသံကိုကြားတော့ မွန်မွန် စိတ်တွေတင်းမထားနိုင်တော့.. ခပ်လေးလေးပဲ အင်းလို့ပြောပြီး ခေါင်းကိုငုံ့ထားလိုက်တော့သည်။ မမမွန်ဆီက ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ ဖြိုးညီ အနီးဆုံး ဟိုတယ်တစ်ခုကို ၀င်ပြီး အခန်းယူလိုက်သည်။ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ မမမွန်နဲ့ ဖြိုးညီ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြောစရာတောင်မလိုဘဲ အ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်ခွာကြသည်။ နှစ်ယောက်လုံး ၀တ်လစ်စလစ်နဲ့ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းဖြစ်သွားကြလေပြီ။ နှစ်ဦးသားခန္ဓာကိုယ်ချင်း ပူးကပ်သွားကြသည်။ မမမွန်ရဲ့လက်တွေကဖြိုးညီ ကိုယ်လုံးကို တရွရွနဲ့ ပွတ်သပ်နေသလို ဖြိုးညီတစ်ယောက် သူနဲ့ ခွဲရတော့မဲ့ မမမွန်ကို လွတ်ထွက်သွားမှာစိုးတဲ့အလား တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်ထားမိသည်။ ပြီးတာနဲ့ မမမွန်ရဲ့ပေါင်ကြားထဲမှာနေရာယူပြီး မမမွန်ရဲ့ အဖုတ်လှလှကြီးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ အားရပါးရလျက်ပေးလိုက်သည်။
မမမွန်တစ်ယောက် ကော့ပျံပြီး ကိစ္စပြီးသွားတဲ့ အထိအောင်ပါပဲ။ မမမွန်ကလည်း ဖြိုးညီရဲ့အတန်ထွားထွားကြီးကို အနမ်းတွေပေးသလို နှုတ်ခမ်းလှလှလေးနဲ့ ကောင်းကောင်းပုလွေပေးသည်။ မမမွန်အားရအောင် စုတ်ပြီးတာနဲ့ မမမွန်ရဲ့ တင်သားကားကားတွေကိုကြည့်ရင်း ဖြိုးညီ လေးဘက်ထောက်အနေအထားနဲ့ မမမွန်ကို လုပ်သည်။ မမမွန်ရဲ့ အဖုတ်စီးစီးလေးထဲမှာ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အ၀င်အထွက်လုပ်နေတဲ့ ညီတော်မောင်ပေါ်မှာ ဖြိုးညီစိတ်ကို နှစ်ထားလိုက်ပြီးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုပ်သည်။ ”အား…. ကောင်းတယ်…၊ ကိုဖြိုး…. နာနာလေး ဆောင့်…” မမမွန်ဆီက မပွင့်တပွင့် တောင်းဆိုတဲ့ အသံကိုကြားရတော့ ဖြိုးညီ ဆောင့် –ိုး နေတဲ့ အရှိန်ကို မြှင့်တင်ပြီး တဖန်းဖန်းမြည်အောင် ဆောင့်တော့သည်။ မမမွန်ရဲ့ အဖုတ်အတွင်းအသားလေးတွေရဲ့ ညှစ်အားအောက်မှ ဖြိုးညီကြာကြာတောင့်ခံမထားနိုင်တော့ပါ။ နောက်ထပ်အချက်ငါးဆယ်လောက် ဆောင့်အပြီးမှာပဲ လိင်တန်တစ်ချောင်းလုံးပွလာသလိုခံစားရပြီး ဖြိုးညီအတန်ကို အဖုတ်အဆုံးထိထိုးထည့်ပြီး ပြန်မထုတ်တော့ပဲ အရည်တွေကို ပန်းထုတ်မိတော့သည်။ အချိန်တော်တော်လေးကြာအောင် မမမွန်ရဲ့ အဖုတ်ထဲမှာ စိမ်ထားပြီးတော့ အနည်းငယ်ပျော့သွားတဲ့ ညီတော်မောင်ကို အဖုတ်ထဲကနေပြန်ပြီး ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ မမမွန်ရဲ့ မျက်နှာနားကို တရွေ့ရွေ့တိုးကပ်သွားရင်း အရည်တွေနဲ့ ပြောင်လက်ပြီးချောမွေ့နေတဲ့ညီတော်မောင်ကို မမမွန်ပါးစပ်နဲ့တေ့ပေးရင်း ပြောလိုက်သည်။ ”မမ… စုတ်ပေးဦး…။” ”အရည်တွေနဲ့ မစုတ်ချင်ဘူးကွာ…။” အာ….။ ဖြိုးညီ တစ်ချက်ညည်းရင်း မျက်မှောင်ကြုပ်ပြလိုက်တော့ မမမွန် ချက်ချင်းပဲ ခေါင်းကို အသာကြွ ပါးစပ်ဟပြီး ဖြိုးညီရဲ့ –ီးကို စုတ်လိုက်သည်။ မမမွန်တစ်ယောက် ဖြိုးညီ မျက်နှာမညိုရအောင် အလိုလိုက်တာဖြစ်သည်။ ဖြိုးညီရဲ့ အတန်မှာပေပွနေတာတွေအကုန်ပြောင်စင်အောင် စုတ်ပေးလို့အပြီးမှာပဲ ဖြိုးညီရဲ့ လိင်တန်ကပြန်ပြီး နိုးကြွလာတော့သည်။ ”အာ….. တောင်လာပြီ။ တော်တော်သန်တဲ့ ငါ့မောင်….။” ”မမ နဲ့ တူလို့လေ…။ အဟီး….” ”အာ…. ကိုယ့်အမကိုယ်ပြန်ပြီး သိက္ခာချနေတယ်….။” ”ခိခိ… ဟုတ်ပါဘူး….။ မမ ကျွန်တော့်ကို ဟိုဟာ ပေးလုပ်ပါလားဟင်…။” ”အင်…. ဘယ်အ၀ှာလဲ…။ ကိုဖြိုး မဟုတ်တရုတ်တွေ မစမ်းနဲ့နော်… မမွန်မကြိုက်ဘူး…။ မမွန်တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး။” ”အာ… မမွန်ကလည်းကွာ…။ နောက်ဆုံးလက်ဆောင်အနေနဲ့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ မောင်လေးကိုပေးသွားပါနော်…။” ဖြိုးညီရဲ့ စကားအဆုံးမှာ မမမွန်တစ်ချက်တွေဝေသွားပြီး ရီဝေတဲ့မျက်ဝန်းအစုံနဲ့ ဖြိုးညီကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ ပြီးမှ…. ”မသိဘူးကွာ…။ လုပ်ချင်လည်း လုပ် …. လုပ်….။” မမမွန် ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ်နဲ့ အိပ်နေရာကနေ ကုန်းထပြီး ကုတင်ပေါ်မှာလေးဘက်ထောက်ပေးသည်။ လေးဘက်ထောက်ပေးထားလို့ နောက်ကို ကော့ပြီး အယ်နေတဲ့ မမမွန်ရဲ့ တင်ဆုံကြီးတွေနောက်မှာ ဖြိုးညီနေရာယူလိုက်ပြီး တင်သားနှစ်ခြမ်းကြားက ခရေပွင့်နီညိုညိုလေးကို မက်မက်မောမောကြည့်နေမိသည်။ ခရေလေးကိုဖွင့်ဖို့ ချောဆီကမရှိ။ ဒါပေမဲ့ သဘာဝကပေးထားတဲ့ ချောဆီကိုပဲသုံးရပေတော့မည်။ မမမွန်ရဲ့ အဖုတ်ဝကနေ စီးကျနေတဲ့ အရည်လေးတွေကို လက်နဲ့သိမ်းကြုံးယူပြီး ဖင်ပေါက်လေးဆီကိုပို့လိုက်သည်။
ပြီးတော့ ဖြိုးညီ လက်ကို တံတွေးအနည်းငယ်ဆွတ်လိုက်ပြီး မမမွန်ရဲ့ ဖင်ဝလေးကို ချောမွေ့သွားအောင် လက်နဲ့ အသွင်းအထုတ်လုပ်လိုက်သည်။ အတန်ကြာအောင် လက်ညိုးနဲ့ အသွင်းအထုတ်လုပ်ပြီးလို့ ချောမွေ့သွားပြီဆိုမှ ညီတော်မောင်ကို မမမွန်ရဲ့ ဖင်ပေါက်လေးနဲ့တေ့ထားလိုက်သည်။ ”မမွန်…. စိတ်ကို လျှော့ထားနော်…။ ဖင်ဝကို ကြုံ့မထားနဲ့…။ ” မမမွန်ကို ပြောပြီးတာနဲ့ ဖင်ဝလေးမှာ တေ့ထားတဲ့ သူ့အတန်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးထည့်လိုက်သည်။ အရည်တွေနဲ့ချောမွေ့နေတာကြောင့် တော်တော်လေးတင်းကြပ်နေပေမဲ့ သွင်းလို့ရသည်။ ဖြိုးညီ ဖြည်းဖြည်းချင်း အချိန်ယူပြီး ညီတော်မောင်ကို မမမွန် ခရေပွင့်လေးထဲ တရစ်ချင်းစီထိုးသွင်းလိုက်တော့သည်။ မမမွန် ဆီက အာ့…. ခနဲ အော်သံကြားရပြီး ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ မျက်နှာအပ်ပြီး ခေါင်းအုံးကို လက်နဲ့ညှစ်ထားသည်။ ”မမ… နာလား….၊ ရရဲ့လား….။” မမမွန် ဘာမှ ပြန်မပြောပဲ လက်ကို အသာမြှောက်ပြီး ဆက်လုပ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ လုပ်ပြသည်။ ဖြိုးညီလည်း မမမွန်ဆီက ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ တစ်ဝက်လောက်ဝင်နေပြီးတဲ့ ညီတော်မောင်ကို အသွင်းအထုတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်တော့သည်။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဖြိုးညီ အတန်ကြီးက မမမွန် ဖင်ပေါက်လေးထဲကို တစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားချေပြီ။ ဖြိုးညီ တစ်ချက်ချင်းပဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်း အချက်နှစ်ဆယ်လောက်လုပ်ပြီးတော့ မမမွန်ဆီက တရှီးရှီး ညည်းသံနဲ့ အတူ တင်ဆုံကြီးကို ကော့ကော့တင်ပေးလာသည်။ ”မမွန် … ကောင်းလား…၊ နာသေးလား….။” ”အင်း….. နာလည်းနာတယ်ကောင်းလည်းကောင်းတယ်….။ လုပ်ပါတော့… မြန်မြန်လေး….။” ဖြိုးညီ မမမွန်ရဲ့ တင်ပါးနဲ့ ဆီးခုံတဖွတ်ဖွတ်မြည်အောင် ဆောင့်ပြီး လုပ်မိတော့သည်။ မမမွန်လည်းကောင်းလာပြီမဟုတ်ပါလား။ မမမွန်ရဲ့ စအိုကြွက်သားလေးက ဖြိုးညီ လိင်တန်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆွဲညှစ်ထားတာမို့ ဖြိုးညီတစ်ယောက်ကိစ္စမပြီးအောင် မနဲပင်ထိန်းထားရသည်။ မမမွန်ကိုလည်း ပိုပြီးကောင်းသွားအောင် လက်တစ်ဖက်နဲ့ မမမွန်ရဲ့ အစိလေးကို ကလိပေးလိုက်သည်။ ခရေပွင့်လေးထဲ တစွပ်စွပ်နဲ့ ၀င်ထွက်နေတဲ့ ဆောင့်ချက်ကိုတော့ မရပ်….။ တအောင့်လောက်ကြာတော့ မမမွန်တစ်ယောက် တအားအား.. နဲ့ အော်ရင်း တင်ပါးအစုံတို့ တုန်တက်ပြီး ငြိမ်သွားသည်။ ဖြိုးညီလည်း စိတ်ကိုတင်းမထားတော့ပဲ ညီတော်မောင်ရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို ရှုံ့ပွရှုံ့ပွနဲ့ ညှစ်ပေးနေတဲ့ မမမွန်ရဲ့ တင်းကြပ်လှတဲ့ စအိုကြွက်သားလေးတွေညှစ်တာကို အားပါးရခံစားရင်း သုတ်ရည်တွေကို ဖင်နဲ့အပြည့်ပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည်။ …..ဆီဒိုးနားဟိုတယ်…. မင်းတုန်းခန်းမတွင် မင်္ဂလာပွဲတစ်ခု ကျင်းပနေသည်။ ဖြိုးညီ မမမွန်မင်္ဂလာဆောင်မှာ သတို့သားအရံလုပ်သည်။ မမမွန်လည်း တစ်ဝိုင်းပြီးတစ်ဝိုင်း ဧည့်သည်တွေကို လိုက်လံနှုတ်ဆက်နေသည်။ နှစ်ဦးသား မျက်လုံးချင်းမဆုံမိအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်နေကြသည်။ မဖြစ်သင့်တာတွေဆက်မဖြစ်အောင် နှစ်ဦးသားစောင့်ထိန်းရမည်မဟုတ်ပါလား။ ဒီနေ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားရဲ့ သတို့သမီးကို သတို့သားအရံက မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်တစ်ရက်တွင် ရှေ့ရောနောက်ပါဖွင့်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကိုတော့ ကာယကံရှင်နှစ်ဦးမှတစ်ပါး….. ပြီးပါပြီ။